ချိန်းတွေ့အရွယ်ရောက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ - ဗီဒီယိုချက်တင်-အကောင်းဆုံး!
သင်မှတ်ပုံတင်နိုင်၏ပရိုဖိုင်တွင်ဆိုက်တာဝန်ခံ၏လုံးဝအခမဲ့။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်ရှာဖွေနေများအတွက်အသစ်အသိ Shantou မြို့ပယ္ခ်နှင့်ချက်တင်ချက်တင်အဖြဲမရှိဘဲကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ကန့်သတ်။ တွေ့ဆုံစကားပြောဖို့သင်၏ရည်းစားသို့မဟုတ်ရည်းစားအတွက် Shantou ကလုံးဝအခမဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်မရှိကန့်သတ်အပေါ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စာပေးစာယူ၊အတုအကောင့်အသစ်များနှင့်ထိန်း။ ငါတို့သည်သင်တို့ရှိရှာတွေ့သောသူသည်လူများအသီးအသီးအခြားအသီးအသီးတွေ့ဆုံရန်အခြား၊နှင့်သို့ရရန်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ သင်မှတ်ပုံတင်နိုင်၏ပရိုဖိုင်တွင်ဆိုက်တာဝန်ခံ၏လုံးဝအခမဲ့။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်ရှာဖွေနေများအတွက်အသစ်အသိ Shantou မြို့ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်နှင့်ချက်တင်ချက်တင်အဖြဲမရှိဘဲကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ကန့်သတ်။
တော်တော်ကောင်လေးတစ်ယောက်၊၊ပြုံးနဲ့ပြောမင်္ဂလာပါ။"ကြောင့်အကြောင်းငါ့ကိုပြောပြ။"ရှိပါတယ်အရေးကြီးသောအရာ။ နေ့တိုင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏လူသိမလှပစိတ်ဝင်စားဖို့ပုံစံမျိုး။ ကစားသမားအားသာမန်မိန်းကလေး။ ဤသည်အချိန်င့်တဲ့အခါသင်က'မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတုံ့ပြန်နိုင်မှကမ်ချက်တင်၏မိန်းကလေးများကိုအောက်ပါနိုင်ငံများမှ:ရုရှားက၊အမေရိက၊ကနေဒါ၊ဥရောပ၊သြစတြေးလျ၊ဒါကြောင့်သင်သာလိုအပ်သည်ကိုသတိရဂၤလည်းပိုက်ဆံ၊ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်ဦးထံမှ။"ဘလော့"ပိုပြီးတက်ကြွ၊ငါဖန်ဆင်းမယ့်အသစ်တွေအများကြီး။ စိတ်ဝင်စားစရာ။ ထိုအခါပျော်မွေ့ကျေးဇူးပြု။ မှန်ကန်သောအပြုအမူ၊ပင်ယဉ်ကျေး။ မရိုင်းစိုင်းဖြစ်၊ဒါပေမယ့်စော်။ ကိုယ့်အပြုသဘောနှင့်ပျော်စရာစကား၊ပရောပနှင့်အတူဟာသက။ လမ်းဖြင့်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုတင်းကြပ်စွာဖြစ်ပါသည် ၁၈၊သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီးကိုသားသမီးရဲ့။
အခြားအမေရိကန်ဗီဒီယိုချက်တင်။ နာမကိုအမှီ၏လူကြိုက်အများဆုံးလူမှုကွန်ယက်။ မရှိညှင်း၊ဒါကြောင့်သတိပြုရကြမည်:သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်မည်သူမဆိုအရာမ်ား၊ ဖို့အတွက်လူသားတစ်ဦးမြင်းမျက်နှာဖုံး။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကအရမ်းလူကြိုက်များပြည်ပမှာ၊ဒါကြောင့်ပြောဆိုရန်၊ကျနော်တို့လုပ်ဖို့ရှိသည်အဓိကအားဖြင့်သာ။ အခြားအမေရိကန်ဗီဒီယိုချက်တင်။ နာမကိုအမှီ၏လူကြိုက်အများဆုံးလူမှုကွန်ယက်။ မရှိညှင်း၊ဒါကြောင့်သတိပြုရကြမည်:သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်မည်သူမဆိုအရာမ်ား၊ ဖို့အတွက်လူသားတစ်ဦးမြင်းမျက်နှာဖုံး။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကအရမ်းလူကြိုက်များပြည်ပမှာ၊ဒါကြောင့်ပြောဆိုရန်၊ကျနော်တို့လုပ်ဖို့ရှိသည်အဓိကအားဖြင့်သာ။
ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့စကားပြောပေးနိုင်ပါတယ်သင်အသက်ရှင်သောဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူအေးမြယောက်ျားတွေနှင့်မိန်းကလေးများအားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ။ ကိုယ့်တူ၊အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သည်အနောက်မျိုးဆက်ကမ်ချတ်ပူဇော်သက္ကာသင်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုနှင့်အတူစကားပြောဆိုချက်ကျပန်းစကားကလူ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျပန်းစကားပြောသင်ပေးတဲ့ဘီယားချိန်းတွေ့ချက်တင်အတွေ့အကြုံနှင့်ရရှိရန်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းကျွမ်းလူတို့နှင့်အတူအွန်လိုင်း။ သုံးကျပန်းချက်တင်အတွက်အသင့်ရဲ့အိမ်ရဲ့နှစ်သိမ့်-သင်လိုအပ်သမျှတစ်ဦးကမ်မှပူးတွဲသင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်။ ထက်လျော့နည်းတစ်စက္ကန့်သင်ချိတ်ဆက်ထားလိမ့်မည်နှင့်ဖို့အဆင်သင့်စတင်စကားပြောနှင့်အတူချစ်စရာမိန်းကလေးသို့မဟုတ်တစ်ဦးအေးမြကောင်လေး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယားချိန်းတွေ့ချက်တင်အခြားရွေးချယ်စရာခွင့်ပြုဖို့သင်နှစ်သက်သောဗီဒီယိုချက်တင်ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်-နှင့်အတူအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ချက်တင်။ ထက်ပိုသန်းလူအသားကိုဒေါင်းလုတ်အက္ပ္ကိုကြောင့်၎င်း၏ရိုးရှင်းပြီးအစွမ်းထက်။ တပ်ဆင်ဗီဒီယိုချက်တင် အက္ပ္ကိုအခမဲ့နှင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးထွားလာအွန်လိုင်းကွန်မြူနတီ။ အလားတူ၊ကိုရီးယားချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုချက်တင်၊အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှာဖွေ၏မိတ်ဖက်များအားလုံးကမ္ဘာအနှံ့။ ဒါကြောင့်လည်းအများဆုံးသက်သာချက်တင်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်:အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဒီဗွီဒီယိုစကားပြောခန်း၊သင်သဘောတူဖို့လိုက်နာရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း။ ယခုသူတို့ကိုကိုသေချာစွာဖတ်ရှုရနိုင်ဖို့အဆင်သင့်ခံစားကမ္ဘာ၏န့်အသတ်။
ö နမူနာ။ မြို့၏ဓာတ်ငွေ့ဓာတ်ရနှင့်နမူနာ။
ဒါကြောင့်၊သင်ဆဲအံ့သြဘာပေးရေးတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်၊ကျနော်တို့အဖြေကိုသိရ။ ဆက်ဆံရေးနေရာယူလူနှစ်ဦးအကြားခြင်းနှင့်တီးခတ်ထွက်ပေါ်သူတို့ရဲ့ဘုံမြေပြင်များ။ ဒီဘုံမြေအပေးအယူဖြစ်ပါသည်၊နှင့်အခြေခံအလွှာများအတွက်ကျူးလွန်ဆက်ဆံရေးကို။ အလျှော့ပေးလိုက်လျောသည်အများအားနားလည်ပေးခြင်းအဖြစ်တစ်ခုခုတက် ကိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်နေရာတစ်နေရာနားလည်မှုသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ။ အဘယ်သူမျှမကလူနှစ်ဦးအတူတူပါပဲ။ မှာအချို့သောအမှတ်သင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်သင်နဲ့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ရှိသည်လိမ့်မယ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှု၊ထင်မြင်ချက်သို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိ။ ဤအချက်မှာပါ၊သင်လိုအပ်ဝန္ခံေျ၊သို့မဟုတ်ပိုကောင်းအခြားရွေးချယ်စရာအလျှော့ပေးလိုက်လျောဖို့။ အလျှော့ပေးလိုက်လျောသည်'အလယ္အပြည်နယ်အကြားပဋိပက္ခအခြားနည်းလမ်းဖြင့်ရောက်ရှိလှန်လျော'။ ဤသည်အပြုသဘောဘက်အလျှော့ပေးလိုက်လျော-သင်တွေ့ဆုံသည့်အခါအလယ်၌။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်သောအပေးအယူအပြန်အလှန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းကြောင်းသင်ကိုယ်မဟုတ်၊ကိုယ်အားဖြင့်၊အခြင်းဖြစ်သည်။ အသီးအသီးမိတ်ဖက်သင့်နှင့်အတူပျော်ရွှင်စေ။ သို့သော်၊ဒါဟာအစအဖြစ်သတ်မှတ်"အကျိုးရှိလက်ခံပါတယ်ကြောင်းစံချိန်စံညွှန်းထက်နိမ့်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်"။ ဤသည်အဆင်းဘက်အလျှော့ပေးလိုက်လျော။ အောင်မြင်စွာအလျှော့ပေးလိုက်လျောဆက်ဆံရေးအတွက်၊သင်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်အကြားကွာဟယဇ် လျှော့ပေးလိုက်လျော။ အလျှော့ပေးလိုက်လျောဘယ်တော့မှမပေးသင့်တစ်ယဇ်၏အမာခံတန်ဖိုးများ၊ယုံကြည်ချက်သို့မဟုတ်လိုအပ်သည်။ သောအခါအတိုင်းအတာရှိပါတယ်တင်ဝေးလွန်းအတွက်အမှား ။ ဤသူနှစ်ဦးစလုံးအလငျးကိုမီးမောင်းထိုးဖတ္တတ္ဖိုသဘာဝအလျှော့ပေးလိုက်လျော။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးအပြီးကျဆုံး၏။ ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအပေးအယူထွက်ကစားအတွက်အလေ့အကျင့်။ အလျှော့ပေးလိုက်လျောအတွက်ဆက်ဆံရေးရှိနိုင်ပါသည်လှည်၍။ ဒါဟာဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည့်လိုအပ်သောမကောင်းသောအ။ သို့သော်၊ထိုမှစွမ်းရည်ကိုလျှော့ပေးလိုက်လျောသည်တန်ဖိုးရှိသောကျွမ်းကျင်မှုဖြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆက်ဆံရေး။ ကျွန်မတို့အမြဲမှန်တယ်၊ဒါပေမဲ့အမြဲအပေးအတွက်၊အလျှော့ပေးလိုက်လျောဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ စေရဲ့အကြမ်းဖျင်းအမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများ၏အောင်မြင်သောဖွဲ့စည်းသည်။ အလျှော့ပေးလိုက်လျောသည်အမြဲလွယ်ကူသည်မဟုတ်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်အနိုင်ရအနည်းငယ်၊တခါတရံတွင်သင်သည်ကိုယ်အနည်းငယ်။ ဒါပေမယ့်ဆိုရင်နှစ်ဦးစလုံး၏ဆန္ဒရှိနေကြသည်မဟုတ်ယဇ်ပူဇော်ဖို့အတွက်ဆက်ဆံရေး၊အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်အဆုံ၏ဆက်ဆံရေးအတွက်ဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်ကြောင်းကြောင့်အကြိတ်ရပ်တန့်။ ဒီတော့၊ကြည့်ရအောင်နေရာနှင့်မအားပေးအားမြှောက်ပါဝင်ဆက်ဆံရေးအတွက်။ အဟောင်းဆိုပြုမင်္ဂလာဇနီး၊ပျော်ရွှင်ဖွယ်အသက်တာသည်အရောင်ပြန်၏အချို့အမှန်တရား။ သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးအများကြီးပျော်သောအခါသင်၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်မဆိုလိုပါဘူးသူတို့ဖို့သူတို့ရဲ့သွားရာလမ်းသာ။ နားထောင်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်သည်အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်သည်။ အချို့ဒေသများတွင်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်ကိုရောက်ရှိအဖြစ်သူတို့ကနေ့စဉ်အသက်တာ၏။ ရှိခြင်းအနက်ဖော်၊အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်လိမ့်မည်ကိုင်တွယ်ရန်အချို့သောကိစ္စရပ်များကိုလမ်းတလျှောက်။ နှင့်ဤအရပ်လက္နက္ျချွတ်ပေးဆောင်။ နားထောငျတျောအသီးအသီးအခြားထွက်၊နှင့်ချိတ်ဆက်ဖန်တီးချက်။ ကိစ္စများအားဖွဲ့စည်းရန်သောအခြေခံများသင်မည်သို့တိုက်ရိုက်ထုတ်သင့်ဘဝအတူတကွအနည်းငယ်ယူညှိနှိုင်းရန်ရောက်ရှိသောနေရာနှစ်ဦးစလုံးခံစားအသိအမှတ်ပြုလက်ခံပါ။ ဒါပေမယ့်အထားအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအလွန်ကြီးစွာသောဝေရှာတွေ့သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးအလယ်၌မြေပေါ်မှာဤအခြေခံကျတဲ့ကိစ္စရပ်များကို။ မင်္ဂလာမေတ္တာမျှပျော်ရွှင်ဘဝ။ အားလုံးအပေးအယူအပေါ်အခြေခံပြီးပေးပြီးယူ၊ဒါပေမယ့်နိုင်မပေးနှင့်အချို့အပေါ်အခြေခံ။ အတြက္ဆိုလည္းမငြိစွန်းပေါ်အချို့သောအဓိကအကြောင်းအချက်များ။ သင့်ရဲ့အခွင့်အရေးနှင့်လိုအပ်မည်ဘယ်တော့မှသင့်ပါတယ်အချိုးအားဖြင့်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်။ ဤဒေသများရှိသင်ဘယ်မှာမဖြစ်သင့်ပြန်ဆင်း၊ နှင့်အပေးအမှန်တကယ်အထက်ကိုင်တွယ်။ ဒါဟာငါ့အလမ်းကိုသို့မဟုတ်အဝေးပြေးလမ်းမသည်အများဆုံးနေရာပေးသဘောထား။ သို့သော်၊သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ချင်သင်အပေးအယူကိစ္စရပ်များအပေါ်အခြေခံကျကျသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်တန်ဖိုးများ၊ဒါကြောင့်ပဲအချိန်မှစတင်လမ်းလျှောက်ရန်ကွာဝေးသည်။ မပေးလျှင်ကိုဆိုလိုသည်လျှော့ချသင့်ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းထက်လျော့နည်းသည်။ ကအကြောင်းတစ်ခုဖန်တီးခြင်းမျှကစားကွင်းထားရှိရန်နှစ်ဦးတစ်ဦးချင်းစီ။ ကဘူးကဂိုးအနိမ့်စံ။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်သင်တို့နှစ်ဦးစလုံးသင့်အလုပ်ဆီသို့ဦးတည်ဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်၏နှစ်ဦးစလုံးသည်သင်၏ကမ္ဘာ။ သတိရ၊သင့်ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုအပေးအဖြစ်သင့်ရဲ့အစချိတ်ဆက်ပြီးမလိုအပ်ပါဘူးအဖြစ်အဓိပ္ပါယ်။ ပြောင်းလဲမှု၊စိုက်ပျိုးနှင့်လိုက်လျောညီထွေ။ သင်ယူသင့်သင်ခန်းစာများနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအဘယျသို့သင်ရှိသည်-သင့်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အဖြစ်သဘောထားသင့်တယ်။ သင့်ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီအစွမ်းသတ္တိနှင့်အားနည်းချက်များကို၊အမြင်နှင့်တန်ဖိုးများကိုချဲ့ထွင်ရန်၊စာချုပ်အသီးအသီးအခြားရဲ့ကမ္ဘာ။ အလျှော့ပေးလိုက်လျောဆက်ဆံရေးအတွက်နိုင်လမ်းခင်းဖို့အရော။
ငါဘယ်လို သိလျှင်မက္ကဆီကိုအတွက်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားတော့ကျွန်မပဲလို့။ သူမက္ကစီကိုမှ၊သို့သော်သူသည်အမေရိကသို့ပြောင်းရွှေ့အနည်းငယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အလုပ်လုပ်ရန်။ သူ့ကိုငါတွေ့သောအလုပ်မှာ။ အသူ၏ပထမဦးဆုံး။ ငါ့အတိတ်ပိုးပန်းအတွေ့အကြုံ၊ငါတွေ့ဆုံခဲ့သူတစ်ယောက်တွေ့ဆုံမှာအလုပ်မှအလုပ်ဖြစ်ဟန်တစ်မျိုး၏လူမှုရေးဘဝလူအများစုအတွက်။ ငါတစ်စုံတစ်ဦးကတွေ့ဆုံကျနော်တို့ရက်စွဲ၊စတိဗ်၊ကျနော်တို့ကြီးမြတ်မိတ်ဆွေများကဖြစ်လာ၊ဒါပေမယ့်မချစ်သော်လည်းသူသည်အလွန်ကြီးစွာသောကောင်လေးသည်။ နောက်နောက်ထပ်လေးကို၊ကိသ်၊သူငါတွေ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး။ သူခံရဖို့ထွက်လှည့်တစ်ဦးအပစ်၊ဒါကြောင့်ကျွန်မသူ့ကိုဘယ်ဖက်နဲ့သူ့ကိုပြောပြခြင်းမရှိဘဲသူ့ကိုအဘယ်ကြောင့်။ မသူနှင့်အတူသွားတွေ့လျှင်သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်၊ဒါပေမယ့်သွားအတူမိမိအဇာတ်ကောင်အခါတည်သင်အရင်ကအတူလိုက်ဖက်တဲ့သင့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်နှင့်တန်ဖိုးများ၊သူနှင့်အတူသွား။ အဆောတလျင်မထွက်ရှာဖို့။ သတိရလျှင်အရာအားလုံးကိုလှည့်အချဉ်၊၏တဦးတည်းသင်ချင်တယ်အလုပ်ပြီးစီး။ ယခုငါအဟောင်းတွေရယ်၊ကျွန်တော်မအလူကျွန်မပြောနေတာ။ ငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်။ ငါကြိုက်တတ်တဲ့အဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အစားထက်အရမ်းကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်အတူ။ သငျသညျစိတ်ဝင်စားကြသော်လည်း၊ရှက်သို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်မှာအားလုံး။ ကြည့်မှာကျွန်တော့်အတန်းထဲတွင်၊ ၽြန္ုပ္၏ရယ်စရာကောင်း၊ပြုမူသောအရှက်နှင့်အရှက်။ သူသည်စိတ်ဝင်စားသော်လည်း၊ရှက်သို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်မှာအားလုံး။ ကြည့်မှာကျွန်တော့်အတန်းထဲတွင်၊ ၽြန္ုပ္၏ရယ်စရာကောင်း၊ပြုမူသောအရှက်နှင့်အရှက်။
ကိုးရီးယားစကားပြောခန်းဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳကိုးရီးယားအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း။ အခမဲ့စာသားနဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်အခန်းပေါင်းအဘယ်မှာရှိသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အများအပြားယောက်ျားတွေကိုးရီးယားမိန်းကလေးများအွန်လိုင်း၊ဒါကြောင့်ပူးပေါင်းစကားပြောခန်းအတွင်းကိုးရီးယားစကားပြောခန်း၊ဆုံနှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါ။ ထဲမှတစ်ခုပေါ်တွင်နှိပ်ပါလိမ့်မည်တိုင်မီပြည်စိမ်း။ ထို့ကြောင့်၊ကုန်အံ့ရဲ့ပူးပေါင်းနှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းဖြင့်ယခုက်ပ္သာကိုရီးယားအခန်း။ ဒီကိုရီးယားလတ်စိမ်းစကားပြောခန်း။ သင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါနှင့်အတူဒေသခံစိမ်းကိုရီးယားမိန်းကလေးများယောက်ျားဆိုတာကိုးရီးယားအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း။ အခမဲ့စာသားနှင့်အတူဒေသခံကိုးရီးယားလူမျိုး။ ပြောဆိုရန်စိမ်းယား စာသား၊ဗီဒီယိုချက်တင်၊အစိမ်း။ ဤသည်အကောင်းဆုံးပြောဆိုရန်အစိမ်းရဲ့စကားပြောဒါင္းချက်တင်နှင့်အတူကိုးရီးယားလူ၊အခမဲ့ကိုရီးယားမိုဘိုင်းချက်တင်၊ကိုးရီးယားအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအကောင်းဆုံးယား ကိုချက်တင်အခြားရွေးချယ်စရာ၊ကိုးရီးယားအကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့၊၊၊ကိုးရီးယားဗီဒီယိုချိန်းတွေ့၊အခြားရွေးချယ်စရာအဘို့အကိုရီးယားစကားပြောနှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏၊အခြားရွေးချယ်စရာ ကိုးရီးယား၊ကိုးရီးယားအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းများအတွက်တစ်ဦးတစ်။ ယူအက်စ်အေ၊ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ကနေဒါ၊မက္ကစီကို၊ယူကရိန်း၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီ၊အီတလီ၊ရိုမေးနီးယား၊စပိန်၊ဆွီဒင်၊ဆွစ်ဇလန်၊ပေါ်တူဂီ၊တူရကီ၊သြစတြီးယား၊ဘီလာရုစ်၊ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ဒိန်းမတ်၊အိုင်ယာလန်၊ဖင်လန်၊သြစတြေးလျ၊အာဂျင်တီးနား၊ဘရာဇီး၊ချီလီ၊ကိုလံ၊ပိုလန်။ ေဆာ္ဒီအာေရး၊ဘာရိန္း၊အာေမးနီးယား၊အီရန်၊အီရတ်၊အစ္စရေး၊ဂျော်ဒန်၊ကူဝိတ်၊အိုမန်၊ကာတာ၊ဆီးရီးယား၊ယူအေအီး၊ယီမင်၊အီဂျစ်၊တောင်အာဖရိက၊ဇင္ဘာေဘြ၊ျရက္စ္၊ေမာ္ရုိကို၊နိုင်ဂျီးယား၊ဆူဒန်၊အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊ယူဂန္ဒါ။ ရုရှား၊အိန္ဒိယ၊ကာဇက်စတန်၊လစ္ဗ်ား၊တာဂျစ်ကစ္စတန်၊ဥဇဘက်၊ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊မင္နီ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ပါကစ္စတန်၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊မလေးရှား၊ဂျပန်၊တရုတ်၊တောင်ကိုရီးယား၊စင်ကာပူ၊ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ။
ပထမဦးဆုံးကြိုးစား၊လန်းဆန်းစာမျက်နှာနှိပ်ပါလက်ရှိအနေအထား။ ဖို့မေ့လျော့မနေပါနဲ့"အခွင့်"သို့မဟုတ်"ခွင့်ပြု"ခလုတ်ကို၏ အရာက္ဇာဖို့သင်မေးပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ရာက္ဇာပါဘူးတောင်းဆိုရန်သင်ကြိုးစား၊ထိုအဆင့်:သင်ဆဲပြဿနာများရှိသည်၊ဂူစစ်ဆေးအပြီးထောက်ခံမှုစာမျက်နှာ။ သင်သည်လည်းရှာအနီးတစ်မြို့တည်နေရာ၊လိပ်စာသို့မဟုတ်။ သင်ဆဲပြဿနာများရှိသည်၊စစ္ေအော်ပရာပြီးထောက်ခံမှုစာမျက်နှာ။ သင်သည်လည်းရှာအနီးတစ်မြို့တည်နေရာ၊လိပ်စာသို့မဟုတ်။ သင်ဆဲပြဿနာများရှိသည်၊အကြည့်အရှုပြီးထောက်ခံမှုစာမျက်နှာ။ သင်သည်လည်းရှာအနီးတစ်မြို့၊မြို့၊နေရာအရပ်၊သို့မဟုတ်။ သင်ဆဲပြဿနာများရှိသည်၊ထိုမြေခွေးထောက်ခံမှုစာမျက်နှာ။ သင်သည်လည်းရှာအနီးတစ်မြို့တည်နေရာ၊လိပ်စာသို့မဟုတ်။ ည့္ဖုိ။ မည်မဟုတ်အသိအမှတ်မပြုရာက္ဇာသင်အသုံးပြုနေကြသည်။ စစ်ဆေးနေကြိုးစားသင့်ရာက္ဇာရဲ့အကူအညီမီနူးသို့မဟုတ်ဝဘ်ရှာဖွေရေးအတွက်ညွှန်ကြားချက်များခွင့်ပြုသောကမ်း သည်။ သင်သည်လည်းရှာအနီးတစ်မြို့တည်နေရာ၊လိပ်စာသို့မဟုတ်။
ဧည့္ခန္းကိုရီးယားမှာဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးမထိဘူးရက်။ ရသောဥစ္စာချီးမွမ်း။ လက်ငင်းအဆင့်အတန်းအနုပညာရှင်။ ယုတ်ပါတယ္။ အနက်ရောင်မိန်းကလေးငယ်များ။ ။ မိန်းကလေးတစ်ဦးသည်အ၊ကျနော်လုပ်ချင်ကြပါဘူး။ ဟေး၊လူတိုင်း။ ငါပြန်။ ကြၽန္ေတာ္ကဧည့္ခန္းကိုရီးယားမှာတချို့၏အကျိုးအပြစ်အထိ။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော့်အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိခိုက်နာကျင်။။။။။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်။ ကိုယ့်အမှုအရာသတိပြုမိတာကတော့ဝေးခြင်းအကြောင်းအနက်ရောင်ရီးယားမှာ။ အားလုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊အမှတ်မုန်း။ ငါတင်အနည်းဆုံးလူတဦးတည်းကဗီဒီယိုတစ်ပါတ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုခံစားမျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါနေဆဲပေါ့အသစ်အဒီကိုးရီးယားဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ အွန်လိုင်း။ ဘာအံ့သြဒါဟာကိုရီးယားမှာ။ အငေးဖို့အကြောင်းမေးခွန်းများကိုငါ့ဆံပင်၊ကျွန်တော်အဖုံးပါ။ ဤအချို့ရှိပါတယ်ငါတွေ့အကြုံများနေထိုင်မှုအတွက်တောင်ကိုရီးယား။ ကိုယ့်အမြင်ငါ၏ပွိုင့်နှင့်အမှုအရာဖြစ်ပျက်သောအကြှနျုပျကို။ ငါအများအပြားကိုရီးယားမိတ်ဆွေတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံ။ သိခဲ့ဖူးပေါ်တစ်ဦး နာက္ထပ္ႏ။ ဘဝဆည်းပူးထားဖို့အကောင်းဆုံးပါ။ ငါတိငါနောက်ကျောတက်နှင့်အတူနေ့စွဲငါ့အဗီဒီယို။ ရှည်ဖြစ်ကျေးဇူးပြု။ သင်သည်ငါ၏ပထမဦးဆုံးရိုက်ချက်၏အကြားခြားနားချက်များခရီးသွားလာအတွက်အာရှနှင့်ဥရောပခရီးသွားလာ။ ဒီဗီဒီယိုရှိခြင်းသည်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသောအရာကိုပြသနိုင်ဖို့ကိုရီးယားအမ်ိဳးစဉ်းစားမြင့်မားသောအနက်ရောင်အမျိုးသမီးအထွေထွေအတွက်နှင့်သွယ်ဝိုက်များသည်အဘယ်ကြောင့်ရှမမေးကြဘူးအဖြစ်။ ဒီဗီဒီယိုမှာနပ်လိမ့်မည်ဖြေဘာကိုအမှန်တကယ်ဆိုလိုသူ့ကိုမှရက်စွဲတစ်ခုမိန်းကလေးတစ်။ ရှိသည်ဖို့ကောင်းသောင်များ၏ဤမျိုးစကားပြောဆိုချက်တွေကိုအတူတကွကြောင့်ဆောင်ခဲ့နိုင်။ အားလုံးအကြံအစည်အတွက်ဤဗီဒီယိုသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်၊လျှင်ကြည့်ချင်ရန်ကျေးဇူးပြုပြီးလက်မထိသြင္း။ ကိုကြည့်ရှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မိန်းမရေကူးဝတ်စုံလိုလားသူ ပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်မှတောင်ကိုရီးယား။ ကေအအာရှတိုက်ကြီး။ လမ်းတစ်လျှောက်သူမတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ရှိပါတယ် ၊အသစ်တစ်ခုကိုယဉ်ကျေးမှု။ ။ ။ ကိုးရီးယားသင်ယူမှုအကြံပေးချက်များ။ ဤဗီဒီယို၌ငါ့ ရဲ့စီးရီး။တင်လိုက်တယ်လိမ့်မည်အသစ်ဗီဒီယိုကိုနေ့တိုင်းမှာပါအလွည့္က်အထိခရစ္စမတ်နေ့။အဘယ်သူမျှမ။ သူတို့အဆင်သင့်မဖြစ်အားလုံးဒီဂျယ်လီ။ ငါအာဖရိကန်အမေရိကန်နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့သူသို့ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုကတည်းက၊ငါသည်ငါ၏အိပ်မက်လက်ထပ်ဖို့ကိုရီးယားလူနှင့်ကြပြီတကား၊ငါမူကားရှိသည်။ ဤသူတချို့ရှိနေပါတယ်ငါ၏(စကားကို'တချို့'နဲ့'ငါ')အတွေ့အကြုံနှင့်အကြံအစည်ဖြစ်ခြင်း၏အနက်ရောင်ကိုရီးယားမှာ။ ကိုယ့်လိုအပစ်အခြားရှုထောင့်အပေါ်။ တစ်ဝက်အကြှနျုပျ၏အတွေ့အကြုံတစ်ခုအဖြစ်အနက်ရောင်အမျိုးသမီးဧည့္ခန္းကိုရီးယားမှာ။ ဒါငါဘယ်လိုခံစားရပြီး၊လူတိုင်းကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံ။ သို့သော်၊ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီအကြောင်း၏ထက်ဝက်။ ဒီဗီဒီယိုကိုပြသငါ့ပုံမှန်အတွေ့အကြုံအတွက်။ အမျိုးသမီးကြီးချိုသော၊နှင့်ဤငါ့အတွေ့အကြုံအကြိမ်ပေါင်းများစွာ။ ကျွန်တော်တို့မပြောကင္မ္ခ်ီမုန်းအနက္ေရာင္။ ဘာကိုးရီးယားလူတွေစဉ်းစားချိန်းတွေ့ အနက်ရောင်မိန်းကလေးငယ်များ? ငါမြင်ကြပြီအများအပြားအနက်ရောင်ပါဘူးချိန်းတွေ့ကိုးရီးယား။ ဒီနေရာမှာရဲ့အစိတ်အပိုင်း။ ကိုးရီးယားဗီဒီယိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ရီ။ ငါပြောသည္။ အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါငါဖန်ဆင်းဒီဗီဒီယို၊နှင့်ဤတစျခုဖွစျလိမျ့မညျ၊ငါ၏နောက်ဆုံးဗီဒီယိုများအတွက်နေစဉ်။ ငါပြုစေခြင်းငှါ၊နောက်ထပ်အဖြူမိန်းကလေးတဦးတည်းပေမယ့်ရိုးရိုးသားသား၊ခက်နှင့်နှောင့်အယှက်။ ပြင်သစ်ကင်ယ့္ျစီးရီး:အသက်ရှင်ဖို့ဘယ်လောက်အတိုင်းအနက်ရောင်အတွက်မိန်းကလေးရီးယားမင်္ဂလာပါယောက်ျားတွေ။ ခွင့်ပြုႏဂိုဏ်းမှာအသစ်သောသီချင်းကိုပြင်သစ်ကင်ကျောင်းအတွက်တောင်ကိုရီးယား။ ဘယ်လိုအသက်ရှင်နေထိုင်အဖြစ်။ ကိုးရီးယားဗီဒီယိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ ရုပ္ရွင္မ်ား၊အနက်ရောင်လူသားအတွက်တောင်ကိုရီးယား၊ပေးသည်မိမိအယူအပေါ်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကို၏နေ့စွဲနှင့်အသက်ရှင်တိုင်းပြည်အတွက်။ ဘာ။ မင်္ဂလာပါယောက်ျားတွေ။ ရောင်းရၸာယ္။ ငါစောင့်ကြည့်ဗီဒီယိုကိုယ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာနှင့်ငါသိငါစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်ၾကည့္ရႈသည္အတွက်ကြောင့်လာမယ့်နှစ်ရဲ့အနေအသာလ၏။ ကျွန်တော်ထင်ယားလူရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးခွဲခြား။ သာအချို့သောလူများ၏'ဖန္တီးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာများ။ ကြည့်ကြရအောင်လားအစစ်ကိုးရီးယားအထင်၏လူဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်ခြင်းအနက်ရောင်အမေရိကန်အမျိုးသမီးခရီးသွားလာအချို့သောထူးခြားတဲ့လက်ဆောင် အတွေ့အကြုံ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းအမေရိကန်ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ကသူမ၏အတွေ့အကြုံ၊အသက်ရှင်အတွက်အလုပ်လုပ်နေ။ ယောက်ျားတွေဟေး၊သင်၏သူတို့အဘို့အကြောင်းစဉ်းစားဖို့လာမယ့်ရီးယားပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်မှုအဘို့၊ဒီနေရာမှာ၏အစိတ်အပိုင်းငါ့ အတွေ့အကြုံ။ မျှော်လင့်နိုင်ပေးအချို့နှင့်အတူ။ စကားေျ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမီး၊၊စကားလက်ဆုံနှင့်အတူတက္ကစီယာဉ်မောင်းပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းနေအိမ်။ ဒီဗီဒီယိုကိုသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်နှစ်ပေါင်း။ ငါးဗီဒီယိုများအတွက်ငါးရက်အားဖြင့် -ဥယ်ာဥ္မွဴး။ လိင်နှင့်စိတ်ကူးယဉ်ပျက်ကွက်-နေ့ကအမှုအရာ ။ ရတဲ့အနည်းငယ်အမှုအရာချွတ်ငါ့ရင်ဘတ်နှင့်ပုံပြင်များဝေမျှငါ၏အအတွေ့အကြုံအတွက်ဗန်ဒါအဖြစ်အနက်ရောင်အမျိုးသမီး။ အနက္ေရာင္လူဦးရေအတွက်ကနေဒါ။ ငါ့အတွေ့အကြုံ၏ဧည့္ခန္းကိုရီးယားမှာဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီး။ အနက္ေရာင္မိန်းကလေးရီးယားမှာအမေးအဖြေ။ အားလုံးအလက်ဖက်ရည်။ ချိန်းတွေ့ ၊ကိုးရီးယားအသားေရာင္စမ်းတွေ့အကြုံ၊။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမေးခွန်း။ အနက်ရောင်အတွက်မိန်းကလေးတစ်ဦးရီးယား။ သင်တို့အသောဆံပင်ဖြစ်၏။ စထွက်စစ်ဆေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းအကျော်ကြားဆုံးအနက်ရောင်လူသားအတွက်ကိုရီးယား၊ဆမ် ။ ကိုးရီးယားဗီဒီယိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ရီ။ ဖက္ရွင္အ အမြဲအဖြစ်၊ကျနော်တို့။ ဒီအချိန်ကြာမြင့်စွာ လာမယ့်။ သင်၏အချို့အားလုံးသွားစေခြင်းငှါ'အမြန္း၊သူသဘောမျိုးတွေအများကြီးနှင့်အခြားသူများဟုဆိုလိမ့်မည်'သင်အ ၊ခွဲခြား၊ ဝက်ရှိကြောင်းမရှိပါ။ ကောင်းသောညနေခင်းပါ။ ဒါကြောင့်ငါဂုဏ်အင်တာဗျူးဖို့ငါ့မိတ်ဆွေ၊ အပေါ်အဘယ်အဖြစ်အနက်ရောင်ဝက်၊ဝက်ယားနေထိုင်စဉ်အတွက်။ ဒီဗီဒီယိုကိုအတူတူချပစ်စူပါအလျင်အမြန်အောင်ဆင်ခြေဆင်ငါ့တည်းဖြတ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှု။ ငါပိုကောင်းလာမယ့်အချိန်လုပ်။ မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပျော်မွေ့။ နေ့ကဗီဒီယိုအမျိုးသမီးအတွက်ယား:လိင်နှင့်စိတ်ကူးယဉ်ပျက်ကွက်။ အထဲကစစ်ဆေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုနန်ရဲ့။ ကိုးရီးယားဗီဒီယိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ရီ။ ဒီဗီဒီယိုဝေမျှ၏အတွေ့အကြုံအနက်ရောင်မိန်းကလေးချိန်းတွေ့အတွေ့အကြုံများကိုရီးယားကောင်လေး။ မှတ်ချက်ထားခဲ့ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျန်းမာ။ ယ့္ျ:အနက်ရောင်အမျိုးသမီးခရီးသြားတစ္ဦးဆိုးလ်၊တောင်ကိုရီးယား။ ရေသို့မဟုတ်နေ။ ဒီမှာမျှဝေလင့်ထားသည်ဒီအတွက်ခရီးသွားလာယ့္ျ။ ယောက်ျားတွေဟေ့။ လာအတူငါကဲ့သို့အကြှနျုပျကိုကြိုးစားမှတောင်ပံဒီယ့္ျ။ ယူအားဖြင့်သင်တို့ကိုအတွက်နေ့ (တောင်ကိုရီးယား)အဘယ်မှာငါအမဲလိုက်ခြင်းများအတွက်အချို့တက်အောင်၊အစာစားကြပါ။ အဘယ်သူမျှမနေပါစေသင်သည်အသက်ရှင်ဘယ်မှာလောကရှိ၊အသက်နှစ်မျိုးစလုံးရှိနိုင်ပါသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်လည်း စိန်ခေါ်မှု။ ဒီနေရာတွင်တောင်ကိုရီးယားကျနော်တို့သိသိသာသာမှကွဲပြားခြားနားသောအများစု၏။.
မရှိဘဲအခြား၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးပြည့်စုံသောဆက်ဆံရေးကြောင့်၊သင်ပေးနိုင်ပါသည်အသီးအသီးအခြားအဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်နှင့်ပို။ဒုတိယ။ І і і і є။ မှတ်ပုံတင်ရန်ဒီမှာအခမဲ့များအတွက်အမျိုးသားများအဘို့နှင့်အတူမြင်နိုင်ပရိုဖိုင်း။ ထိုအခါမှတ်ပုံတင်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်နှင့်အတူစကားပြောအမျိုးသားနှင့်ယောက်ျားလေးများအတွက်သာအချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ဒါပေမယ့်လည်းအခြားကမ္ဘာတဝှမ်းနိုင်ငံပေါင်း။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အောင်မေတ္တာ၊အသစ်သောအသိအကျွမ်းတွေ၊မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပိုပြီးမကြာသေးမီအသိအကျွမ်း၊ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားကြည့်ပါချိန်းတွေ့ဆိုက်။
ချိန်းတွေ့နှင့်အတူလူနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက် သို့ရောက်အင်တာနက်နှင့်အခြားများပြားသောဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း။ သူတို့ကတွေ့ကြပြီသို့၎င်းတို့၏နည်းလမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကို။ ကျေးဇူးတင်ဖို့အသိအကျွမ်းနှင့်ယုံကြည်ချက်၊အင်တာနက်ကိုလည်းခံစားကြရပြီးပါပြီတစ်ဦးအားကြီးသောမိသားစုအနာဂတ်။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊တွင် ၂၀၁၅၊၅၈၍ကွာရှင်းသို့မဟုတ်လက်ထပ်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့ကွာဟချက်ပါ။ မျှော်လင့်ကစားရန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍအဖြစ်ယခုအဟ။ ရှာဖွေ ၏တွေ့န်ဆောင်မှုအပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက် စစ်မှန်တဲ့ႏွင့္ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအများစုဟာအောင်မြင်စွာ။ ဒီဆိုက်တာဝန်ခံအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးဖို့မည်သူမဆိုအကဲဖြတ်ဖို့။ အပေါ်သစ်တစ်ခုအဆင့်အ ၊အလေးအနက်ထားဆက်ဆံရေးအတွက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊အားလုံးအစာရင်းသွင်းန်ဆောင်မှုများဆိုက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်အခမဲ့။ အချို့လူရှိပါတယ်မကြည့်တော့ဘူး။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်တစ်ခုခုပြောစေခြင်းငှါသဘာဝ၊လူအများကြီးပိုလန္ကသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝနှင့်အမှန်။ ငါပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့ပွုနိုင်ပါတယ်။ သင်စရာမလိုပါလျှင်ရဟန်းသည်သို့မဟုတ်တစ်ရသေ့၊ထိုသို့ဆိုသောကြောင့်နေအလေးပေး။ ရန်လိုအပ်သည်အရည်အသွေးတိုးတက်ကောင်းမွန်။ ဒါဟာစတူဒီဆုံးဖြတ်ချက်။ ဒါဟာပိုမိုလွယ်ကူနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အထီးကျန်နှင့်အတူထက်ခေတ်မီလူနေမှုအခြေအနေ၊ဒါပေမဲ့၊သို့သော်ငြားလည်း၊အဆန့်ကျင်ပေါ်၊ဒါကြောင့်ပိုပြီးခက်ခဲသည်။ သင်သိသည့်အတိုင်း၊ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘွား၊မိဘ၊ဟားမစ်သို့မဟုတ်ထိုသစ်ပင်စောင့်ကများ၏ရှေ့မှောက်၌အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်သူများရဲ့နေ့။ ၎င်းစီစဉ်သူများအသိုင်းအဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှိပါတယ်လွန်းများစွာသောလူရှိပါတယ်။ ဤသဘောမျိုးခုနှစ်၊ဒီတော့လွယ်ကူသည်မဟုတ်အတွက်ခေတ်မျိုးဆက်။ မဒါအတော်များများဒေသခံများအထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ အဆောက်အအုံလုပ်ကွက်သို့မဟုတ်။ ယခုရှိပါတယ်ပိုမိုသင့်လျော်သည်။ ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ၊ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်၊ကြောင်းကလပ်သင်သွားချင်တယ်။ ရှိလူတစ်ဦးကဒီမှာအတွက်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာအားလုံး။ ကုမ္ပဏီရဲ့အသွားအလာကြီးမားပြီးအသံမှခက်လွန်းမက။။။။။ ဒါပေမယ့်အင်တာနက်။ ဒါကြောင့်ပိုပြီးအစွမ်းထက်နှင့်လက်တွေ့ကျကျ၊သင်သိမထားဘူးဆိုရင်အရာအားလုံးအတွက်အထွေထွေကို-မိနစ်အနည်းငယ်အ၊သင်လိုအပ်အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ် ၏မြို့တော်မော်ရိုကို။ လုပျနိုငျအနည်းငယ်အတွက်မိနစ်။ တက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်သင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးအသုံးပြုသူအသစ်။ အမေးခွန်းလွှာနှင့်အတူပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကြီးမားတဲ့အရေအတွက်၏။ ထိုပန်းတိုင်အားလုံး၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းအနှင့်တွေ့ဆုံရန်အလေးအနက်လူမျိုး-လိုသူတွေကိုရှာဖွေတဲ့အိမ်ထောင်၊သားသမီး၊နှင့်ပို။ တဦးတည်းအနေလျှင်သင်၏လူအတော်များများခံရမေးခွန်း၊သင်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်။ အဘို့အသင့်လျော်သောဤပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကာလ၊ပုံသဏ္ဌာန်၊မျက်နှာအသွင်သဏ္ဌာန်၊ဆံပင်အရောင်နှင့်အခြားပါရာမီတာ:"မြောက်မြားစွာစံမ်ားအဖတ်၊အလိုင်းခွဲခြားသတ်မှတ်သူတို့ကိုယ်သူတို့၊သင်သည်အဘယ်သို့ပြုချင်လိမ့်မည်။ ဒီအချိန်ကြာမြင့်စွာဖြစ်လိမ့်မည်စာပေးစာယူအတူ၊အချို့လူများက။ဤလမ်းကြောင့်၊လူမသိနောက်ဆုံးကွန်ဂရက်အလွန်ကောင်းစွာ။ အခြားသူများကို၊ထိုနေ့ရက်စွဲပြီးနောက်။ အလယ်တန်းအဆင့်မှအသွင်စာပေးစာအရလိုအပ်ချက်များ၊လူတစ်ဦး၏၊သင်ဆက်သွယ်နိုင်အတူမ-၏နေ့စဉ်။ ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်များအတွက်ရှာဖွေရေး၏အိပ်မက်ကိုအောင်မြင်မှု၊ချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုနေရာတိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များကဲ့သို့ ၊အများကြီးလိမ်လည်။ ဒါဟာမှန်ကန်သည်ဟုဆိုရန်ဤအမှုမဖြစ်၊ဒါပေမယ့်ပိုကောင်းစေခြင်းငှါဤလမ်း။ ဒါပေမယ့်လုပ်မပါဘဲဤအကြောင်းပြချက်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်၊သင်လိုအပ်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အတွေ့အကြုံ၏ဤအချိန်။ သင်ကံကောင်းနေလျှင်၊သင်ပါလိမ့်မယ်တွေ့ဆုံအားဖြင့်သင်ဂရုစိုက်တစ်စုံတစ်ဦး။ မဆိုလိုပါဘူးမည်မဟုတ်မိတ်ဆွေကောင်းကိုလူတိုင်းဘယ်သူသည္။ ဤအခြေအနေမကြာခဏပေါ်လာ။ အတိအကျ။ အများအပြားယောက်ျားနှင့်မိန်းမရလဒ်များကိုပြသမှာသာ၏မျက်နှာကိုထောက်။ ချင်ကြပါဘူးနှင့်အတူအသက်ရှင်။ ကျေးဇူးသင်တို့အဘို့အအချိန်ယူ။ အတွေ့အကြုံရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအတွက်သွားနှင့်ထွက်သည်တဖြည်းဖြည်း ။ တစ်ဦးတည်းသာအရာ၊သငျသညျမကြာမီသဘောပေါက်၊ဒါကြောင့်အသုံးမကျ။ ဒါဟာလည်းအရေးကြီးသောအားလုံးအချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်အခမဲ့။.
မက္ကဆီကိုသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသောအမေရိကန်ဗားရှင်း-ဗမာအတြက္ကေတာ့တည်ရှိ၊ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာဒါဟာမတည်ရှိပါဘူး။ တကယ်တော့၊မက္ကဘာသာစကား-ဒဏ္ဍာရီ။ အများဆုံးကိုယ်စားလှယ်များနိုင်ငံတကာအသိုင်းအနား"မက္ကဆီကို"ရဲ့တမျိုးကဲ့သို့စပိန်ဗားရှင်း၊ပဲပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်အောက်ပါဝိသေသလက္ခဏာများ၏အခြေအနေ။ ဒီ့၊မက္ကဆီကိုစပိန်ယခုအခါမိခင်ဘာသာစကား၏သူသာသက်သေခံများ၏အသွင်အရုရှ-မက္ကအွန်လိုင်းဘာသာပြန်။ ဤအရာတစ်ခုခုသည်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအထဲသို့သွင်းလေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊အင်တာနက်အသုံးပြုသူများအဖို့စွမ်းရည်ကိုဖယ်ရှားပစ်မည်သည့်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ရပ်ကနေဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်။ အွန်လိုင်းမက္ကဘာသာပြန်နှင့်အတူ အမျိုးကိုဘာသာပြန်စနစ်အပေါ်အခြေခံပြီးအသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ အစာရှောင်ခြင်း၊အရည်အသွေးမြင့်မားနှင့်လုံးဝအခမဲ့၊ ကခွင့်ပြုမှလိုသူမည်သူမဆိုဘာသာပြန်စာသားသို့နိုင်ငံခြားဘာသာများကိုတစ်ဦးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အသေးစိတ်အဖြေကို။ ဒီတော့လျှင်သင်ရုတ်တရက်ရန်လိုအပ်ဘာသာျပန္ခ်က္ကနေ"စိတ်ကူးယဉ်မက္က"၊သင်မေးနိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းဘာသာပြန်များအတွက်အကူအညီ၊ဖျော်ဖြေပန္ခ်က္မ်ားအတွက်မက္ကဆီကန်စတိုင်သို့အီတလီ။ မစ်ရှင်၏အွန်လိုင်းဘာသာပြန်သူ-အားလုံးသည္ပိုပြီးဖြစ်လာကြပါပြီနားလည်နိုင်၊နှင့်နည်းလမ်းများအရပန္ခ်က္မ်ားအွန်လိုင်းဖြစ်ကြောင်းရိုးရှင်းတဲ့နှင့်လွယ်ကူသည်။ ခပ်သိမ်းသောလူတစ်ဦးအဘယ်သူသည်ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်တယ်စာသားမဆိုဘာသာစကားသို့မိနစ်အနည်းငယ်အတွက်အသုံးပြုမည်သည့်ခရီးဆောင်စက်။ ကျနော်တို့ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်"ဖယ်ရှား"ဘာသာျပန္ခ်က္ခက်အခဲမှဂျာမန်၊ပြင်သစ်၊စပိန်၊အင်္ဂလိပ်၊တရုတ်၊အာရဗီနှင့်အခြားဘာသာစကားများ။ ကျွန်တော်နားလည်လိမ့်မည်အသီးအသီးအခြားကောင်း၏။ အကောင်းဆုံးအဖြစ်ဖို့ပစ္စည်း၏မိုဘိုင်းဖုန်းအတွက်ဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး:-သိ၏ဦးစားပေးကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများနှင့်အလုပ်သူတို့အဘို့အကြည့်ဖို့အတွက်စုံလင်ခြင်းအဘို့အသေးစိတ်နှင့်အဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အွန်လိုင်းအဘိတည္ေနရာ-အသုံးပြုဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနည်းလမ်းအဖြစ်၊ဒါပေမယ့်မအဖြစ်၊အဆုံးသတ်တစ်ခုဖန်တီးရန်"ကြယ်ပွင့်အဖွဲ့"၊"အလောင်းအစား"အပေါ်အခွက်တဆယ်ကိုကျော်လွန်မစ်ရှင်နှင့်ရူပါရုံရှိပါတယ်၊အခြားအရေးကြီးအကြောင်းပြချက်အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီအွန်လိုင်းအဘိ။ ဒါက"အမြစ်အကြောင်းမရှိ"ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုဆန္ဒမှကူညီသည်သားသမီးများဖြစ်လာကြသူအသားကောင်များ၏စစ်ပွဲကိုအပြင်းအထန်နေမကောင်း၊ခုြသူကိုလက်ခံရရှိကြပြီမဟုတ်လုံလောက်သောလူမှုရေးအကာအကွယ်။ လစဉ်လတိုင်း၊ကျွန်တော်တို့အစီရင်ခံဆယ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝင်ငွေကိုကူညီပါ။ ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးတာဝန်။ အားလုံးအလုပ္သမားမ်ားငါတို့သည်စားအစားအစာဝယ်၊စာအုပ်များ၊ကစားစရာအရုပ်၊ငါတို့သည်အရာရာ၌လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟောပြောဖို့သူတို့ကိုကျွန်တော်သူတို့ကိုပညာ၊ငါတို့သည်သင်တို့၏စောင့်ရှောက်မှုယူ။ သင်သည်လည်းသေးသေးလေးတစ်ခုရှိသည်ဖို့အခွင့်အကူအညီ-တက်လက်မှတ်ထိုး။ ရတမာ)မှာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တစ်ဦးလွှဲပြောင်း(အဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုထည့်သွင်းနိုင်အောင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုပေးပို့အစီရင်ခံ)။ရက်ရက်ရောရောဖြစ်၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့တစ်ဦးချင်းစီအတွက်တာဝန်ရှိသည်အဘယ်သို့ဖြစ်ပျက်။
အဖြစ်မကြာမီအဖြစ်ဖြင့်ချိန်းတွေ့၊အရာမရှိစဉ်းစားရန်၊အင်တာနက်ကိုနေဆဲဖြစ်သည်။ ယနေ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဖြစ်လာသည်အဖြစ်ရေပန်းစားအဖြစ်ခေတ်မီသောဗားရှင်းရန်အတွက်လာမယ့်ပျော်စုံတွဲတွေကိုရှာဖွေရန်ဤချဉ်းကပ်မှု။ အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များဦးဆောင်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းပျော်ရွှင်မှုအတွက်အလေ့အကျင့်အားဖြင့်ပြသ။ က်းဇူးျပဳ၍ေရြးခ်ယ္ပါအရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြောင်းပြီးသားမှတ်ပုံတင်အားဖြင့်အသုံးပြုသူအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်နှင့်အကျိုးစီးပွား။ အရမ်းလွယ်ကူတဲ့မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်စကားပြောခန်း၊စားစရာနှင့်အလှန်။ ပေးသည်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုသိကျွမ်းနှင့်အတူဤသူအပေါင်းတို့သည်အရည်အသွေးကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများအနေဖြင့်မည်သည့်အချိန်နှင့်အခမဲ့။ ဆိုရင်အကွာအဝေးကနေအသီးအသီးအခြားထံမှအခွင့်လျှော့ချဖို့အကွာအဝေးကနေကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဖုန်း၊ လည်းမိုဘိုင်းဗားရှင်း။
အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်တိုက်ရိုက်ဒီခေတ်သစ်ရာစုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်ယားတစ်ဦးတစ်အွန်လိုင်းမှာရှချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအဘို့မေတ္တာနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်း၊ဆက်ဆံရေးနှင့်အိမ်ထောင်ပြု။ အပေါ်ကိုရီးယားချိန်းတွေ့၊သင်မြင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောသို့မဟုတ်ပင်သန်းပေါင်းများစွာသောတစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်ရီးယားနှင့်အခြားနိုင်ငံများတင္ထားသည္င်းတို့ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်း။ အဆိုပါစာရေးဆရာအကြောင်းနိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာ၏တစ်ခုတည်းကိုးရီးယားအမျိုးသမီးနှင့်ကိုရီးယားမိန်းကလေးများစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်မှာအခမဲ့ယားချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ရှာဖွေရေးနှင့်အမြင်များအပြားဆွဲဆောင်မှုရှာဖွေနေအမျိုးသမီးအမျိုးသားများအတွက်အခမဲ့နေ့
ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ပတ်လည်-အ-နာရီစိဝန်ဆောင်မှုအမြဲထံမှသင်တို့ကာကွယ်တင္ျချက်တင်၊ထိတ်လန်ပုံရိပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ချက်တင်။ သင်လိုအပ်သမျှ သင်ပြုလိုအပ်သမျှသည်မှတ်ပုံတင်နှင့်တာင္းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်ကုမ္ပဏီအမှ။ ပထမတစ်ချက်မှာ၊ကျနော်တို့လိုအပ်မည်၊မရလျှင်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်။ ကျနော်တို့အများကြီးရှိသည်ဆွဲဆောင်မှုစတစ်ကာများနေ။ ဒါဟာဖို့အချိန်င့်ရတစတစ္ကာ၊အလုံးအပိုဒ်။ နှင့်ဤအမှုသည်လူကြိုက်အများဆုံးပုံပြင်များအောင်ပရိသတ်အၿပံဳး ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ်၊စာရင်းတစ်ခု၏အသုံးပြုသူများ"ငါ့သျှင်"အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်၊အဖြစ်စနစ်ဆိုတာစိမ်းနှင့်ကျပန်းပါသည္။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊သင်လျစ်လျူရှုမလိုချင်တဲ့ ရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှသူတို့ကိုပေးပို့ခြင်း။ ဒီနေရာတွင်အောက်ပါအမှုအရာလုပ်ဖို့ချဲ့ထွင်ရန်သင့်ရဲ့စက်ဝိုင်း၏မေတ္တာနှင့်မိတ်ဆွေများအတွက်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးများ။ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားအလွယ်ကူဆုံးနှင့်အဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကမ္ဘာတဝှမ်းကလူ၊နှင့်အတူမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုအသိအကျွမ်းများအားဖြင့်အောင်မှအွန်လိုင်း ။ စဉ်းစားသည်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုတွေ့ဆုံရန်ဖို့လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ကဲတစ်ဦးကောင်းချက်တင်၊လူတွေနဲ့မိန်းကလေးများ။ ပာကစားတဲ့စကားပြောဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှတစ်ဦးလှပတဲ့ဒီဇိုင်း၊မွတ္ထားနှင့်ကျယ်ပြန့်နှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာများ၏ပို။ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုများအတွက်ပေးချေသည်တရားနာသူအားဖြင့်။ မွ၊အခက်အခဲနှင့်အတူလက်မှတ်ထိုးပြီးထွက်ခွာ။.
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ စတင်ရှာဖွေနေခြင်းအားဖြင့်အတည်ပြုများအတွက်ဖုန်းနံပါတ်အမျိုးသမီးအသက် ၄၀-၈၀၊သာအတွက်ဆော်လမွန်ကျွန်းစုများ၊ချက်တင်နှင့်ဇုန်။ အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးများကိုအသက် ၄၀-၈၀ နှစ်အတွက်ဆော်လမွန်ကျွန်းစုလုံးဝအခမဲ့။ မရှိကန့်သတ်အရေအတွက်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များရှိရမယ်တုအကောင့်အသစ်များအတွက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စာပေးစာ။ ကျွန်တော်တို့ကန့်သတ်ကြသည်မဟုတ်အရေအတွက်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုက်ပေါ်တွင်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ စတင်သင့်ရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်အတည်ပြုများအတွက်ဖုန်းနံပါတ်အမျိုးသမီး ၄၀၈၀ အသက်အနှစ်ဆော်လမွန်ကျွန်းစုများ၊ချက်တင်နှင့်ဒေသများသာ။
သဟဇာတမဖြစ်တဲ့ကိစ္စဓာတုဗေဒ၊သို့မဟုတ်အစား၊မယ့်ကိစ္စဓာတုဗေ။ ထိုသို့မဟုတ်ပဲအကြောင်းတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာတွေ့တူညီသောဝါသနာ။ ဒါဟာအစမမေးခွန်းတစ်ခုရှိခြင်း၏တူညီသောမိသားစုဖွဲ့စည်းပုံမှာသို့မဟုတ် ပင်။ ဆီတစ်ခုတည်းကိုယုံကြည်လိုက်ဖက်တဲ့မှကြွလာအပေါင်းအပေါင်းတို့၏အအချက်များထဲသို့ကျအဆင့်အားဖြင့်အတက်ကြွမက္ကထူးခြားတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကကျနော်တို့ရှိသည်။ ကနေကယ်လီဖိုးနီးယားမှနယူးယောက်မှဆီယက်တဲလ်မှမိုင်ယာ၊မက္ကဆီကန်-အမေရိကန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနှံ့အပေါ်မှီခိုဆီတစ်ဦးတစ်ယောက်၊တစ်ထိပ်တန်း-ထစ်မက္ကချိန်းတွေ့ဆိုက်ကိုချိတ်ဆက်စွာမိမိတို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူအချိန်။ ထူးခြားတဲ့မက္ကဆီကန်-အမေရိကန်တွေကြိုက်တတ်တဲ့အပေါ်တွေ့ဆုံရန်တစ်ဦးပလက်ဖောင်းကဲ့သို့အထက်တန်းလွှာတစ်ဦးတစ်ယောက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များအနက်တစ်ခုရှာဖွေနေစစ်မှန်သောချိတ်ဆက်။ ရိုးရှင်းစွာအတင်ထား၊အဖွဲ့ဝင်များ၏အကလပ်ယူနိုက်တက်အားတစ်ယဥ္ေက်းမျိုးဆက်:အကောင်းဆုံးဂိမ်းလည်းလိုက်တူညီသောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရှိသည်၊တူညီသောအဆင့်ပညာရေးနှင့်ဝင်ငွေ။ ဆိုတော့လိုက်ဖက်ကလည်းတစ်စုရဲ့တန်ဖိုး၊စဉ်တစ်ချိန်တည်းမှာကျင်းပမတူကွဲပြားမှုကို၏အခြားနည်းလမ်းများ။ အပေါ်အခြေခံပြီးအားလုံးဒီ၊ကျနော်တို့အကြောင်းယုံကြည်အခြေခံချဉ်းကပ်ရန်ဤအပြင်ပအချက်များဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်အားကောင်းဆက်ဆံရေးပိုမိုအားကောင်းဖြစ်ကြောင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့ဝင်များအောင်မြင်သောများမှာ၊နှင့်ကြိုးပမ်းများအတွက်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောဆက်ဆံရေးနှင့်အတူအသီးအသီးအခြား။ အခါသင်ပါဝင်ရန်အတွက်အလွှာတစ်ခုတည်း၊သင်လျင်မြန်စွာနားလည်နှစ်ဦးအမှုအရာ။ ပထမဦးဆုံး၊ရွေးချယ်ခန့်မှန်းကနေရှာလိုက်ဖက်သောအမှန်တကယ်အတူလိုက်ဖက်တဲ့။ ဒုတိယအ၊အ ၏အဖွဲ့ဝင်များသည်ရွိႏိုင္ပါျပီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မက္ကချိန်းတွေ့နှင့်အတူရေရှည်ကတိကဝတ်ဆွဲဆောင်နိုင်မှုအကောင်းဆုံးကြသူအဖွဲ့ဝင်များအဆင်သင့်ရှာတွေ့ဖို့"ညာဘက်တယောက်ဒီ"ဘဝခံစားတဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူတက်ကြီးထွားလာသောသူအတူ။ လူသစ်နှင့်တွေ့ဆုံသည့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်လောကသည်မလွယ်ကူသော်လည်း၊အတွေ့နိုင်သည်နိုင်ဖြစ်ခြင်းတည်းရှိသည်သောသူလူအနည်းဆုံးအလားတူယဉ်ကျေးမှု၊ပညာရေး၊သို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးနောက်ခံမကြာခဏခံစားရသူတို့ထားလျက်ရှိသည်မှောင်ကွက် ။ သင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အကွက်နှင့်အလှဆင်၏အသက်ကြီးမင်းခင်ဗျား၊ဒီနေ့ရဲ့အဆီတစ်ဦးတစ်ကစားသမားတွေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုခြင်းအသိဉာဏ်စနစ်ဟာချိန်းတွေ့၊ငါတို့သည်အသစ်တစ်ခုဖန်တီး(ပြီးအောင်မြင်)မက္ကချိန်းတွေ့မြင်ကွင်းတစ်ခု။ ဒါလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ခေါင်းဆောင်မက္ကနှင့်လက်တင်အမေရိကန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ချိန်းတွေ့နှင့်အတူအခြားသူများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များအနက်၊ယဉ်ကျေးပြီးရင့်ကျက်၊နှင့်အတိအကျသိနိုင်ပေးနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့မျှဝေနိုင်ပါသည်အတွက်ရေရှည်ဆက်ဆံရေး။ သူတို့မျှဝေဖို့ဆန္ဒရှိသူတို့၏အသက်တာနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ယောက်သူတို့အထင်အဘော်စိတ်ဝိညာဉ်တော်မူသောသူတို့ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုကြီးထွားလာအတွက်အသက်နှင့်အဘယ်သူကိုထောက်ခံနိုင်တဲ့တန်းတူအဖြစ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုမှအမှန်တကယ်ဖမ်းယူဤအရည်အသွေးစိတ်ကူးကြိုးစားတဲ့အခါချိတ်ဆက်ဖို့အပေါ်ချိန်းတွေ့ပလက်ဖောင်း။ သင်တန်းသားများကိုအဘို့အရှာကြသည်မိတ်ဖက်အသာမက္ကဆီကို၊အထူးသဖြင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းသပ်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်။ အသီးအသီးအသစ်အသုံးပြုသူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစမ်းသပ်မှုများ၊နှင့်များ၏ရာပေါင်းများစွာအသစ်လက္တံေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့။ ကျွန်တော်ပေးဖို့အလားအလာသူများမှဝစွာထဲကတစ်ခုမေးခွန်းလွှာသောအုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်အတည်ပြုတန်းတည်း။ ထိုမေးခွန်းများကကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခံရဖို့ပျော်စရာနှင့်အတှငျး၊နှင့်အသင် မွေ့လျော်အတွေ့အကြုံရေငုပ်၏။ အားလုံးပြီးနောက်၊အခြားဘက်ခြမ်းအလားအလာရှိပါတယ်ရှာတွေ့ဖို့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကိုသင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေ၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာအတော်များများအဖွဲ့ဝင်များနောက်ဆုံးမှာသင်ယူပါလိမ့်မည်အကြောင်းနည်းနည်းမိမိကိုယ်ကိုဤလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်။ သို့သော်၊ကျွန်တော်တို့အလုပ်နောက်ကွယ်မှ၊နှင့်နံပါတ်များနှင့်တွက်ချက်ပြီးအဖြေရှာဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှပေါင်းစပ်။ အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥာဏ်ပညာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစမ်းသပ်မှု၊ငါတို့သည်လည်းတွေ့ဝင်သောသူရှယ်ယာတစ်ဘုံယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံအရောင်သို့မဟုတ်အမွေအနှစ်၊ဥပမာအားဖြင့်၊အခြေခံအပေါ်၎င်းတို့၏ပညာရေးနှင့်ဝင်ငွေအဆင့်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံ၊ဂိမ်းကြောင်းမျှဝေဒီအခြေခံအဆင့်ရှိအလွန်ဆင်တူတန်ဖိုးများ၊အရာဖြစ်၏စိတ်နှလုံးမှာစစ်မှန်တဲ့စိတ်အားထက်သန်နှင့်ရေရှည်ကတိကဝတ်။ အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိဉာဏ်တွဲဖော်ရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ၾကိဳးစားေရအဖြစ်အနီးကပ်အဖြစ်တတ်နိုင်သမျှအဝိသေသလက္ခဏာများနေကြောင်းသင်တို့အဘို့အမှန်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်သည်ကိုယ်ပိုင်နှင့်အထိခိုက်မခံအဘယ်သူသည်သင်တို့ဖြစ်ကြပြီးသင်သည်အဘယ်မှာရှိသွားအတွက်ဘဝ။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်သင်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ရှို့သန်းခေါင်ရေနံနိုင်ဘဲအပြင်ထွက်ပြီး လူမှုရေး၊အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နေဖို့လုံခြုံတဲ့နေရာလေးတစ်ခု။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာနေဆဲတွေ့ရှိရန်ခက်ခဲတစ်ဦးပလက်ဖောင်း၏လိုအပ်ချက်များကိုက်နှင့်ထောက်ခံပါတယ်၏ခရီးကောင်းစွာလုံလောက်။ ပြီးတော့အဲဒီမှာဖွင့်မေးခွန်း၏အနိုင်ဖြစ်ခြင်းအမှန်တကယ်ထိတွေ့ဆက်ဆံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်၊ကောင်းကောင်း-အစ္ကိုရှာနေကြသူအဖွဲ့ဝင်များအတွက်အတူတူပါပဲ။။။။။ အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲ"စမတ်"ချိန်းတွေ့ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်၊ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဦးတစ်သင်အသုံးပြု။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတစ်ခုတည်းကမ္ဘာတစ်ခုဖွင့်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကျေးဇူးတင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ထို့ကြောင့်ကိုက်ညီနိုင်သမျှကိုက်။ ပင်နှင့်အတူ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အောင်မြင်တဲ့တစ်ဦးတစ်ယောက်အနေဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်၊အကယ်ဖို့ကြိုးစားမှကျြထွက်တွက်ဆအတိအကျသောသူကိုဝိသေသလက္ခဏာအနီးဆုံးအရာကိုသင့်အဘို့အရှာဖွေနေအတွက်ရေရှည်ပူးပေါင်း။ သင်ကအပေါ်တစ်ဦးပလက်ဖောင်းရှိပါတယ်နိုင်စွမ်းကိုထောက်ပံ့ဖို့အသင့်ရှာပြီးအပ်နှံသည်မှချိတ်ဆက်ညာဘက်လူတို့နှင့်အတူ ပင်သင်တို့အဘို့အ၊ဒီအအများကြီးအဖိုးတန်အချိန်ဖြုန်း။ ဆီတစ်ခုတည်းသာဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့်လည်းလုံးဝအရွင္း၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးလက်ခံပွဲ။ ပြီးတာနဲ့ပြီးစီးခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရှင်းပြီးမှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတည်ပြုသင့်ရဲ့အဆင့်အတန်းအဖြစ်တစ်ခုတည်းအတန်းကစားသမား၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်ရှာဖွေစူးစမ်းစတင်ရန်။ ငါတို့မူကားလည်းသင်ပို့-စာပေးစာယူနှင့်အတူတစ်ဦးတစ်ကျနော်တို့စဉ်းစားနေကြတယ်ကြောင်း၊အပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုက်ညီတဲ့နည်းပညာနှင့်အတူ၊သင်ကျိန်းသေအောင်မြင်။ ဒီရေတွင်းတစ်တွင်း-အချိန်းတွေ့အတွေ့အကြုံ၊ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်များအသုံးပြုလိုဆီတစ်ဦးတစ်ချိတ်ဆက်ဖို့သူတို့နှင့်အတူသူတို့၏အတွေးအဖြစ်။ သင်သည်လည်းရှာဘို့အမိတ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုခြင်း"တန်ပြန်"။ အဗိုလ်လုပွဲစကားလုံး၊သင်တန်း၏၊လက်၌ရှိ၏ကြောင့်၊သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်အရာအားလုံးနှင့်ပရိုဖိုင်းကိုချိတ်ဆက်ဖို့။ အဟောင်းချိန်းတွေ့ရုံတလမ်းတည်းဖြင့်သင်အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့ဖူးတဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့သင်သည်သင်၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွေ့အကြုံ။ စဉ်လက်ထပ် အများ၏စိတ်တစ်ခုတည်းလူများနေထိုင်ခဲ့သိရသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝနှင့်အတူ၊အမျိုးမျိုးသောကတိကဝတ်စောင့်ရှောက်သောသူတို့ကိုရွေ့လျား၊သူတို့ကအစတစ်ဦးအုပ်စုတစ်စုတည်းနေသောလူဒါကြောင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှင့်စစ်မှန်သောအဖော်သူတို့အဘို့၊သူတို့မှီခိုအပေါ်အသုံးဝင်သောအလွှာတစ်ခုတည်းအက္ပ္ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့သူတို့ကိုချိတ်ဆက်။ ပူးပေါင်းပြီးယနေ့ရရန်တကယ့်အဆီအတွေ့အကြုံ။ ယခုသင်အတွေ့အကြုံ၏တန်ခိုးမက္ကချိန်းတွေ့ဆိုက်ဆီတစ်ဦးတစ်ယောက်ကနေညာဘက်ကိုသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်နိုင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊မတ်ဖြည့်ဆည်း၊သူတို့ရဲ့ပရိုဖိုင်နှင့်အတူစကားပြော၊သူတို့ဆေးဖက်အပေါင်းတို့အားဖြင့်လျှောက်လွှာပုံစံ။ ဒါကဘယ်လိုလျှောက်ထားချိန်းတွေ့ဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်အတွက်? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့မှချစ်သူများရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်၏အထက်တန်းလွှာတစ်ခုတည်းအတွေ့အကြုံ။ တက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းအားဖြင့်နှင့်မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူယနေ့ကြှနျုပျတို့က၊သင်သည်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါမည်သည့်မေးခွန်းများကိုပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အဆိုပါကဏ္ဍတစ်ခုလုံးကိုကာလအတွင်းသင့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်များ၏။ အကြှနျုပျတို့သညျမှကျူးလွန် သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအစည်းအဝေးနှင့်အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများမှာရည်ရွယ်မှာကူညီပေးသင်ရှာတွေ့"မှန်"။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးပြီးစစ်ဆေးအသီးအသီး၏အသစ်အဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင်၊နှင့်အတူသူတို့တစ်ဦးဘွဲ့သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား။ ရွေးစင်အဖွဲ့များ၊ပလက်ဖောင်းနှင့်ချိတ်ဆက်-အလားအလာဆီလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တိုင်းပြည်အနှံ့၊အဆင်သင့်ဖွင့်ဖို့သူတို့ရဲ့ခရီးကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့အချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ လာနှင့်ပူးပေါင်းပြီး။ စစျဆေးဖို့မေ့လျော့မနေပါနဲ့ထွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့စာကြည့်တိုက်နှင့်စာကြည့်တိုက်အကြောင်းအထူးဒီဇိုင်းအဖြေအထွေထွေချိန်းတွေ့မေးခွန်းများအပေါ်ပိုပြီးတိကျတဲ့အကြောင်းအရာ၊ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုအကြံပေးခြင်းနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖျော်ဖြေအကြံဉာဏ်များပေးအပ်အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနှံ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းအတွက်ပဲနောက်ထပ်နည်းလမ်းအလွှာတစ်ခုတည်းစူးမိမိတို့၏အောင်မြင်မှု။ လျှင်အောင်မြင်မှု၊ဒါပေမယ့်တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံ၊သင်သောခံစားချက်ရတစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲသည်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေသူရှယ်ယာများ၏တန်ဖိုး။ ဒါပေမဲ့အခုတော့သူတယောက်တည်းမဟုတ်နှင့်အသင့်မရှိတော့ခွင့်ပြုဖို့ချစ်ပေါ်မှာထိုင်၊သူ့ကို ထိုင်ခုံနောက်ကျော။ ငါတို့သည်သင်တို့အလယ်ဗဟိုတွင်ရှေ့ဆက်နိုင်အောင်သင်နောက်ဆုံးတွင်အမှားနှင့်စတင်သင့်မေတ္တာဇာတ်လမ်း။
ဂီအတွက်ရှိပါတယ်၊တစ်ဦးတည်းသာအရပ်အသစ်များအတွက်အသိအကျွမ်း။ လစ္စသည်အလှဆုံးမြို့တော်ကိုအပေါ်ဒီစာရင်း။ ဤသည်၏မြို့တော်ကတ္အေ၊ယူဖြည်းဖြည်းအချစ်လမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်အတွက်လုပ်ကြတဲ့ကော်ဖီခွက်မှာ ညဦးယံ၌အတွေ့အကြုံအရကြိုဆိုလေထု။ အမွေး၏ဒေါင်လိုက်၊ဒေါင်လိုက်စပျစ်ရည်ကိုအကြားသဘောတူညီသင်္ဘောကြီးကောင်းသောမြည်းစမ်းခင်မှာအကောင်းဆုံးဂီစပျစ်ရည်ကို။ ကြိုက်သူတွေအတွက်အနားယူရန်၊အ ရှိလှပသောအသဲကမ်းခြေနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျ၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူကမ်းခြေပေါ်။ -ဤအသစ်အကျွမ်း၊စိတ်နှလုံး၌တည်ရှိ၏အ ၊ရှည်လျားသင့်ရဲ့နေအိမ်များအတွက်ဂီတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊စကားပြော၊ပျော်စရာရှိခြင်းသို့မဟုတ်ရော။ ထက်ပို ၁၀၀၊၀၀၀ လူတွေဟာစိတ်အပိုင်းအဖြစ်အပျက်အတွက်၊နေ့တိုင်းအမြဲရှိပါတယ်အများကြီးကိုစိတ်ဝင်စားစရာမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားတွေ၊မိတ်ဆွေတွေ။
မက္ကအွန်လိုင်းချက်တင်-မက္ကစီကိုအွန်လိုင်းချက်တင်အတွက်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းချက်တင်နှင့်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း။ ချက်တင်ဆိုဒ်များမက္ကစီကိုအတွက်အခမဲ့အွန်လိုင်း။ အခမဲ့မက္ကအွန်လိုင်းချက်တင်၊အွန်လိုင်းချက်တင်၊အွန်လိုင်းချက်တင်။ အတွက်၊အများကြီးပို။ နိမိတ်လက္ခဏာတက်အခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်နှင့်အတူစကားပြော၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်တွေ့ဆုံရန်လူတို့နှင့်အများကြီးပို။ ကနေရွေးချယ်ရာပေါင်းများစွာ၏အွန်လိုင်းချက်တင်စကားပြောဆိုမှု၊ပူးပေါင်းအွန်လိုင်းချက်တင်အက္ပ္ကိုအတွက်အွန်လိုင်းစကားပြောခန်း။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့နှင့်ပျော်စရာ။ အွန်လိုင်းချက်တင်။ အတွက်၊အများကြီးပို။ သင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တစ်ခုစတင်နိုင်ရန်၊ပူးပေါင်းချက်တင်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွက်။
၊သင်ပြန်အမှတ်၊သည်ဆိုက်ကိုမြန်အောင်ကျပန်းချိတ်ဆက်ဖို့ဘျ။ ရှိမြဲအခွင့်အလမ်းရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖွယ်လူတစ်ဦးနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စကားပြောဆို။ ဒါပေမယ့်သင်ကပိုပြီးဖွယ်ရှိင့်ချိတ်ဆက်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးမှပယ်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းလိမ့်မယ်လို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဖုံးလွှမ်း။ အပေါ်အလေးပေးတစ္ေဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်၊သင်မူကား၊ပေါ်ရွှေ့နိုင်မှဗီဒီယိုစကားပြောဖို့နောက်ထပ်အားဖြင့်ရိုက်'နောက်တစ်ခု။ 'ဆိုက်ထွက်လှိမ့်နှင့်အတူဒေသခံအင်္ဂါကိုခေါ်ဒေသခံကစားတဲ့စေချင်သနည်းသောအသုံးပြုသူများ' လိပ်စာများ၊ဒါပေမယ့်မယူခဲ့ပါပယ်ဝဘ်စာမျက်နှာအတွက်ဒေသခံဝန်ဆောင်မှုမတည်ရှိတော့ဘူး။ အခုတော့၊ပိုကောင်းသို့မဟုတ်ပိုဆိုးဘို့၊ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့စကားပြောခဲ့သည်ပြန်လည်တည်နေရာ-ဝေမျှစိတ်ကူး(ကာဂၤါ)၊ပြီးရင်အလှမ်းဝေးသည်ထက် အတွက်နောက်ထပ်ဧရိယာအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ ထိုသို့ဖော်ပြပြားကမ်မြစ်ရေပေါ်တစ်လူပျိုစာမျက်နှာ('နိစည်းများ'စတိုင်)၊အချက်နှင့်အညီတစ်ချက်တင်အခန်းတစ်ခန်း။ သင်ထင်လျှင်သင်၏အလားအပင်ပိုပြီးထိတွေ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းမှပူးတွဲလူသိသူသင်ဘယ်မှာနေထိုင်မယ်လို့အယူခံသာမှအလွန်သတ္တိသို့မဟုတ်အလွန်ထူးဆန်းဆန်း၊သင်ချင်စေခြင်းငှါ၊နောက်တဖန်အထင်။:ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့ချက်တင်ပြောပါတယ်ထွားလာမှာတစ်ဦးနှုန်း၊အသစ်အသုံးပြုသူများ နေ့တိုင်းရှိတယ်လို့အကြောင်း၊တက်ကြွသောချက်တင်အခန်းပေါင်း(အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိက)ကိုလက်ခံတစ်သန်းလာရောက်လည်ပတ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းဂုဏ်ယူရှိခြင်း၏အချို့သောကျော်ကြား ၊ပါမစ္ ၊၊ဒေါမန်နေဂျာကောင်လေး ၊ရွန် ။ အသစ်တည်နေရာဂၤါကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးဖော်ပြမှသာတစ်မိုင်ဝက်လျှင်သင်ဆုံးဖြတ်မျှဝေဖို့အဘယ်မှာရှိ။ 'ဤအကြောင်းကိုအားလုံးဆက်လက်အောင်ကမ္ဘာတစ်ပိုချိတ်ဆက်နေရာဝဘ်ကနေတဆင့်၊'ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့ချက်တင်ရဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်သူဒန်လိတ်ပာသည္။ 'ပြောလဲပုံမှန်အစည်းအဝေးယားချိန်းတွေ့စကားပြောခန်းသင်အသုံးပြုဆွေးနွေးဖို့ငါးဖမ်း၊ဒါကြောင့်ဤအင်္ဂါဖြစ်စေမည်ပင်ပိုမိုလွယ်ကူသူတို့အဘို့အအသုံးပြုသူများသည်အတွေ့စစ်မှန်သောအသက်တာ၌အမှန်တကယ်အငါးဖမ်းခရီးစဉ်။ 'အတူအချို့သောမဆိုင်းမတွ၊ငါကတစ်ကြိုးစားပေးရဖို့။ ငါနဲ့တူသလိုခံစားရခဲ့ဝင္ဖိုသို့လူတွေရဲ့အိပ္ခန္းထဲကအအီအကြှနျုပျ၏။ ခဏတစ်ဘို့၊အပြစ်မဲ့ပုံရ။ သူမချစ်ပါဘူးလူ-ၾကည့္ရႈသည္။ ထိုအခါငါလပ်ငါ့အတွက်ကမ်ရန်ရွေးချယ်ရှာဖွေ ငါ့ကိုအနီးမှဂူဂဲလ်မြေပုံကဲ့သို့သောစာမျက်နှာ အရာအနည်းငယ်သာအထပ်ကိုယ်စားပြုအနီးအနားချက်တင်။ သို့အတွက်အရာတို့ကိုရိုသေလေးစားရန်အခြားသူများအတွက်အခန်းကိုထားခဲ့ဒရာမာ။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမဒရာမာ။ မိန်းကလေးထားသီဆိုကိုယ်သူမှ။ တစ်ခုမှာကောင်လေးပြန်ဖြေသူ့အဆဲလ်ဖုန်းအဖို့ပြောနေတာစတင်ခဲ့သူ၏မိတ်ဆွေအကြောင်းကိုချစ်။ အခြားမိန်းကလေးကိုယ့်သူမ၏ကျန်ကြွင်းဖုပေါ်မှာဖြစ်တစ်မှေးလောက်မှာ:။ မီတာ။ ငါအဝင်အခြားစကားပြောခန်းနှင့်စောင့်ကြည့်အကောင်လေးနှင့်အတူနားကြပ်ပေါ်၌မိမိ ။။ သာတူညီသောအခန်း၊ငါစကားကိုနားထောင်မှလူပြောသူ၏အသက်တာဇာတ်လမ်း။ အခြားလူကြီးလူကောင်းကဲ့သို့ထင်ကစားခဲ့သောမေးခွန်းများနှင့်အတူအုပ်စု။ တစ်ဦးကမိန်းကလေးခဲ့နားထောင်ခြင်း၊ချပြီးနှုတ်ခမ်းတောက်ပြောင်ပြီးလျှင်အဘယ်သူမျှမသိနိုင်။ ငါခို၊ပိတ်ငါ့ကမ်၊နှင့်မှနျနားထောငျေျပာပါတယ္။ တယောက်သောသူမည်မျှလောက်စကားပြောသူတပါးအတွင်း'ထ'ရုပ်ရှင်နှင့်မည်သို့သူသည်အထင် ။ ။ ဂျိုးတစ်သူရဲကောင်း။ မကြာမီရုပ်ရှင်ဆွေးနွေးရန်သို့လှည့်အမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအစည်းအဝေးများအတွက်ဆိုတော့သမီးတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေ။ ဒါဟာဘာလဲလိုခံစားမိ:ဖြစ်ခြင်းအပေါ်ကပ်ရထားနှင့်ဖို့အတင်းအဓမ္မနားထောင်ခြင်းအပေါ်ကြောက်မက်ဘွယ်သော စကားပြောဆိုချက်။ ကိုယ့်အကြိုက်နှင့်အတူအဲကျယ်မျာအပေါ်မီးရထား၊ငါခံစားခဲ့ရအဲဒီကလူအနီးကပ်လွန်းၽြန္ုပ္၏အဆုံးစီးနင်းမလာနိုင်ဘူးအလျင်အမြန်။ သိဤလူများနေထိုင်ခဲ့တွင်းမိုင်ငါ့ကိုဖန်ဆင်းအမှုအရာပိုမိုဆိုးရွားစေခြင်းငှါရညပ်နောက်သူတို့ထဲကတဦးတည်းအတွက်လိုင်းမှာတပြင်လုံးကိုအစားအစာ၊သူတို့အပေါ်သွားကြောင်း ။ ငါဂျိုး။ ဖရန်စစ္စကိုသည်တစ်မြို့ငယ်လေး၊အားလုံးအပြီး။
အလယ်ပိုင်း၊အပေါ်တစ်ဦးအများစုအစရှိဆိုးလ်ရထားဘူတာရှုမြင်နိုင်မည်အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအကြီးအောင်ကြိုးပမ်းပေးဖို့ဒေသခံမိန်းကလေးများလက်ထပ်ဖို့လယ်သမား။ ကတည်းက၊လူငယ်အမျိုးသမီးအဖို့မက်လှုပ်ရှားမှကျေးလက်မြို့များကြောင့်အလိုလိုက်ပိုကောင်း။ ထို့ကြောင့်၊သာရှိပါတယ်လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်ကျန်ရှိနေသူတို့ရဲ့ဇာတိမြို့မှကြည့်ပြီးနောက်မိမိတို့၏လယ်ယာနှင့်အစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း သွား။ ဒါကကမ်ပိန်းအောင်မြင်ဖို့အကြောင်းဆောင်ခဲ့၊မည်သည့်ရလဒ်ကောင်း။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်၊နောက်တဖန်တစ်ဦးထက်၏ပဉ္စမမြောက်ကိုးရီးယားလယ်သမားများနှင့်ငါးဖမ်းသမားမျိုးသမီးများလက်ထပ်င္ငံျခားသားမ်ား။ အဘို့လက်ငင်း၊ ပြည်နယ်သည်အကျော်ကြားများအတွက်အမြင့်ဆုံးအရေအတွက်ကိုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ထိမ်းမြားကိုရီးယားမှာရောက်ရှိနေတဲ့အထွတ်အထိပ်အကြောင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်။ အချိန်အခါအရာရာကိုရီးယားအမျိုးသားနှင့်တရုတ်၊အရှေ့တောင်အာရှအမျိုးသမီးဖဲ့ထုတ်၊တစ်အိမ်ထောင်ပွဲစားကိုယူပြီးရုံအနည်းငယ်ရက်။ မရှည်လွန်ခဲ့တဲ့၊အများအပြားပြည်နယ်များနှင့်မြို့တွင်တောင်ကိုရီးယားဆိုင်းငံ့အသင်းကချီးမွမ်းယက်နမ်တို့သမီးသည်ကောင်းသောသဘာဝအလျောက်သီလ:သစ္စာရှိမှု၊မိသားစု-နစ္နှင့်လုံ့။ ကဲနိုင္ငံျရထားသည့်မင့်၊ဒါကြောင့်ခက်ခဲကြည့်ဖို့စခဲ့ရပေးယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ။ စာရင်းအင်းအရေအတွက်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုများကမၾကဲ။ သန်းကျော်အတွက်စုစုပေါင်းလူဦးရေသန်းအတွက်တောင်ကိုရီးယား။ ဤသည်ထူးခြားပြောင်ပုံမှာတစ်တိုင်းပြည်နှင့်အတူအချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်တည်မှုအစဉ်အလာအမျိုးသားရေးညွှတ်။ ထီးမွီဖို့ဦးဆောင်ခဲ့ပြီးအလေးအနက်ကျားမအချိုးမညီမျှအတွက်တောင်ကိုရီးယား။ သာ၊ ဝက်၏အလယ်တန်း-အသက်ယောက်ျားတယောက်တည်းနေထိုင်အတွက်တောင်ကိုရီးယား၊နှင့်ဤအရေအတွက်တိုးပွားလာခဲ့သည်-ခေါက်ကတည်းက။ မွေးဖွားနှုန်းလျော့ချဖို့။ ကလေးများအတွက်အမျိုးသမီး အသက်အရွယ်၊နှိုင်းယှဉ်ဖို့အတွက်သားသမီး။ ဤသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အပင်၏ဤလောကအတွက်နှုန်းထားများ။ ခြင်းမရှိဘဲလူဝင္မႈ၊အလုပ်သမားအင်အားလျော့လိမ့်မည်အလွန်သိသိသာသာရီးယားမှာ။ ကိုးရီးယားအစိုးရကိုအလွန်အမင်းထက်သန်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်အကြောင်း-တိုင္းရင္းသားတယ္။ အဆိုပါဘတ်ဂျက်များအတွက်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုများတိုးပွားလာခဲ့သည်ကတည်းကအထိဘီလီယံဝမ်(သန်းကိုယူအက်စ်ဒီ)။ ခန့်မှန်းခြေအားထောက်ပံ့စင်တာများကိုဘာသာပြန်ချက်များ၊ဘာသာစကားသင်တန်းတွေ၊ကလေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြသည်ထူထောင်မြှင့်တင်မှဤ။ ကျောင်းသားအုပ်ယခုင္သည္အပေါ်ကဏ္ဍစုံ-ဖစ္ဘူး။ သာ၊ဝက်သွေးကလေးများခွင့်ပြုပူးပေါင်းစစ်ရေး။ အခါ အလုပ်လုပ်သူအတွက်တောင်ကိုရီးယားတရားမဝင်ဒုက္ခသည်တစ်ဒါဇင်၏ကင္မ္ခ်ီကနေမီးအတွက်၊ဒေသခံတိုက်တွန်းအစိုးရသည္ဤ နေထိုင်ခွင့်နဲ့အစိုးရသဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ သို့သော်၊အတွက်ကျသွားနှင့်အညီကိုးရီးယားယဉ်ကျေးမှု အကြောင်း-ဖစ္ဘူးမိသားစုအဘို့နေဆဲခက်င္ငံျခားသားမ်ား။ အဆိုအရစစ်တမ်းအားဖြင့်ရီးယားအချက်အလက်များ၊အသီးအသီးအဘို့နှင့်အတူလက်ထပ်ထိမ်းမြားင္ငံျခားသားမ်ား၊လက်ထပ်ထိမ်းမြားအဆုံးပထမဦးဆုံးအတွင်းအနှစ်။ သာ၊မႈမွေးဖွားသူများကလေးများအားလုံးမှနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ထိမ်းကြသည်မဟုတ်နှင့်အတူပေး။ များစွာသောမိခင်များသိနည်းငယ်ကိုးရီးယား။ ဒီနေရာမှာအချို့၏အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများခွဲခြား။ ကိုရီးယားအစိုးရသည်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းအပေါ်ထောင်။ နောက်ဆုံးအလုပ္၊အစိုးရကထုတ်ပြန်ကြေညာနှစ်ခုအသစ်အချက်များ:သတို့သမီးမဖြစ်မနေပြောကိုရီးယားဘာသာစကားနှင့်ကိုရီးယားတို့သက်သေပြရပါမည်ဘဏ္ဍာရေးဝင်ငွေအစိုးရ။ ဝေဖန်ပြောတင်းကျပ်သာအအိုမင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အမျိုးသားရေးအင်အား။ ။ လီမေရိကန်အတွက်၊တစ်ဦးလက်ထပ်ထိမ်းမြားပွဲတွင် -ဟုအရေအတွက်အမျိုးသမီးများအဘို့အခွင့်ထောင်ကျုံ့မူမည်။ အများဆုံး၏အသတို့သမီးကလာဆင်းရဲသောကျေးလက်ဒေသများမဟုတ်နိုင်စွမ်းတက်ခူးကိုရီးယားဘာသာစကား။ ဤအတောအတွင်း၊ထိုယှဉ်ပြိုင်မှုမှကြွလာတရုတ်တို့သမီးကိုနိုင်ငံ မြင့်မားသောအရေအတွက်ထောင်ရှာကြံအမျိုးသမီးယှဉ်ပြိုင်အလွန်အမင်းအပြင်း။ တကယ်တော့၊၏အရေအတွက်ကိုကိုးရီးယားအမျိုးသားများလက်ထပ်င္ငံျသတို့သမီးကနေကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်၊အတွက်၊ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က။ ထိုသူတို့တွင်၊စုစုပေါင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်အဆိုပါမြို့။ ကင်မ်ဝတ္စံု-ရွင္ေ-ဗီယက်နမ်-ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုစင်တာအတွက်ဟနွိုင်းပာယက်နမ်မိန်းကလေးများမရှိတော့ချင်ချိကျေးလက်ဒေသများ၏တောင်ကိုရီးယား။ သူတို့ချစ်ၾကည့္ရႈသည္ကိုရီးယားရုပ်ရှင်နှင့်ကေပေါ့ပ်ဂီတနှင့်သူတို့လိုချင်တဲ့အတွက်အသက်ရှင်ရန်။ ေကိုးရီးယားသူမ်ား၊ရုပ္ရွင္-မင်းတစ်ပွဲသာနိုင္ငံျဆိုပိုပိုကောင်းပညာတတ်၊ပင်လူများကိုပိုင်အဖွဲ့၏အမြင့်ဆုံးဝင်ငွေအတွက်တောင်ကိုရီးယား။ သူမ်ားေတြသတိထား မႈမ်ား(အဒဏ်သက်တမ်းအတွက်သာတစ်တန်းကိုရီးယားအမျိုးသမီးကိုခေါ်သောစည်းစိမ်တိုက်)။ သူတို့ကြိုက်တတ်တဲ့အဇနိုင်သူအယူအပေါ်အစဉ်အလာအခန်းကဏ္ဍကိုအစဉ်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးအဖို့ဆန္ဒရှိနေကြသည်မဟုတ်ကြဘူး။ အဆိုပါပွဲ၊အလိုဆိုရင်အမျိုးသားစတင်မိတ်ဆက်ကြသည်ကိုနိုင်ငံခြားမယားအားဖြင့်မိမိတို့၏မိတ်ဆွေများ၊မဟုတ်ပွဲစားများမှတဆင့်။ ရှိစေခြင်းငှါသင့်တော်သောဖြေရှင်းချက်အတွက် လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲ ကိုးရီးယားလူ့အဖွဲ့အစည်း။
ကျွန်တော်ကြိုးစားရေးသားဖို့ပိုပြီးအကြောင်းကိုသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံ၊ပြန်လည်အကြောင်းအရာများ။ အဘယျသို့ငါမြင်ဖြစ် ကျွန်မနားထောင်ကြည့်ပြီးရေးသားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒီဇင်ဘာလနှင့်မတ်လအတွက်ငါးလ။ ဤသက်ဆိုင်သည်။ တစ်ဦးစံပြနေရာအတွက်ဆောင်းရာသီ။ လေထုအပူချိန်နှစ်ဆယ်ငါးည၊အရက်သုံးဆယ်ပတ်လုံး၊ပင်လယ်။ အလွန်လှပသောပင်လယ်နှင့်သဲ၊အသဲအကိုအောက်မှာနေပူ။ မှောင်မိုက်၏ပျော်စရာတွေအများကြီး၊အရပ်အတော်လေးစျေး(အယူကြပြီမယ်လို့တစ်အလုပ္အနှစ်)။ အပန်းဖြေစခန်းနှင့် ။ အဓိကခရီး၏အလယ်ဗဟိုရစ်ဘီယံပင်လယ်။ အဆိုပါလူဦးရေသည်ကရာမြို့၊မြို့မအသေးစား၊ဒါပေမယ့်မဘယ်မှာသင်သွားချင်တယ်။ အခြေခံအားဖြင့်၊ကြမ်းပြင်။ အနှစ်ဒေသများအတွက်ဒေသခံများနှင့်ခရီး-ကကျစ်များ၏မိုင်အကွာတစ်လျှောက်ပင်လယ်ရေအားလုံးနီးပါးခရီးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကနေရွှေ့။ ကျနော်တို့အသက်ရှင်သောတဆယ်ငါးမိနစ်မှဟို၊တစ်ကြီးမားသောစတုရန်း(ဘေးဘားတစ်ခုနှင့်စျေးဝယ်စင်တာ)။ ကျနော်တို့များသောအားဖြင့်မိနစ်လေးဆယ်ကွာကနေကမ်းခြေ၊အလုံးကမ်းခြေအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဇုန္။ အဇာလက်တွေ့မလိုအပ်ခြင်း၊အီလက်ထရောနစ်ဗီဇာထုတ္ေ-ကိုယ့်ပုံစံကိုဖြည့်အသံရုံး၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်။ နှင့်အဇာ၊သင်မူကား၊စစ်ဆေးရမည်နှင့်အတူလေကြောင်းလိုင်းသငျသညျထားခဲ့ပါခြင်းမပြုမီ၊ ရှိမရှိသူတို့ထောက်ခံမှုအီး-ဗီဇာ(အားလုံးမဟုတ်ပြေးအတွက်သင့်လျော်ဖြစ်ကြ၏)။ သီအို၊သငျသညျပျံသန်းနိုင်မှအားလုံးလေကြောင်းလိုင်းများများစာရင်းအပေါ်။ အဇာသင်အမှန်အသက်ရှင်ရန်အနည်းငယ်နေ့ရက်ကာလအဘို့၊ထို့နောက်သင့်ကိုအောင်တိုင်းပြည်ထွက်ခွာနိုင်ပြီးယင်ကောင်သည်ရက်အနည်းငယ် စံပြအခြေအနေ။ တစ်ဦးနေအိမ်သို့ပါမစ်နိုင်ရုတ်သိမ်း၊နှင့်ဤကတည်းကခက်ခဲမဟုတ်ပါဘူးနှင့်ဆက်စပ်အဖွင့်လှုပ်ရှားမှု၊သင်တို့သည်ဤမျှလုပ်နိုင်တာသင်ဆန္ဒရှိလျှင်။ ရှိခြင်းတစ်ဦးနေအိမ်သို့ပါမစ်၊သင်၌ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖြစ်ရပ်များ၊ကားများ၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ဖွင့်တဲ့ဘဏ်အကောင့်၊ရထူးလျှော့စျေးအပေါ်အချို့သောဖ်ာ္ေျ။ ပျံသန်းအတွက်တူညီသောဦးတည်ချက်။ မလိုအပ်တဲ့ဗီဇာရှာပြီးဆိုင်တစ်ဆိုင်အတွက်သင့္ေတာ္ေသာလုပ်ခဲ့ကြတာပါ၊ကျွန်တော်မလွန်ကူးလက်မှတ်ထိန်းချုပ်မှုမှာဥေ၊ဒါပေမယ့်ယူကရိန်းမှာကျနော်တို့တောင်မှပိုပြီးသံသယကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးလုံခြုံရေးကြောင့်ရုတ်တရက်မသွားသည်။ အစားထိုးမှတဆင့်တိုင်းပြည်ကုလသသင်လိုအပ်နိုင်ပါသည်အဇာမှနိုင်ငံများကုလသမဂ္ဂ၏-သတိပြုရကြမည်။ ဇိမ်ခံဘတ်စ်ကားထွက်ခွာလေဆိပ်အတွင်းနေ့၊ညအချိန်တွင်သာရှိပါတယ်အတွက်တက္ကစီမြန်မာ။ ပုတ်ခတ်မြို့ အများကြီးကားမ်ားႏွ။ လူကမ်းခြေကနေရောက်လာမှာဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်။ တက္ကမှ၊အလယ်ဗဟိုမှအမြောက်ကမ်းခြေ။ ခန့်မဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်လျက်ရှိ။ ကျွန်တော်တို့ငှားအားဖြင့်ညဉ့်အခါမင်းကြီး၊နှစ်ဆယ်ကို-ငါးရက်။ ဟိုတယ်အတွက်လေးဆယ်၊အနီးကကမ်းခြေ။ ရေရှည်နေရာထိုင်ခင်း:အလုပ္ရွာေသုံးရက်ပတ်လုံး(စတူဒီယိုတိုက်ခန်းများ၊အလွန်သေးငယ်)၊မလွယ်ကူသော-ဇင္ဘာလကအပူဆုံးရာသီ(ရောက်ရှိ)၊အထွတ်အထိပ်-ရွာက္မႈမ်ိဳး(ဒီဇင္ဘာ)။ အလို:လမ်းပေါ်ကအမေးများအတွက်အပေါ်တစ်ဦးလျှော့စျေးအဘို့အရပ်(သိမှခရီးသွားကုန်သည်)များအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်ဘာသာလမ်းပေါ်မှာ၊ဒါပေမယ့်မရှိသလောက်။ သော်လည်းအလွန်နှစ်လိုဖွယ်အသိဗမာ၊နေရာထိုင်ခင်းအပင်ခက်ခဲဆုံးအရာလိုအပ်ပါတယ်။ နှင့်ပြီးသား၊ဇန်နဝါရီလတွင်သူတို့တွေ့တဲ့တုိက္ခန္းကိုတလအတွက်၊အိမ်မှာအတူကြီးမားသောစင်္ကြံနှင့်အသေးစားအိမ္ဝင္း(ဘယ်တော့မှမထိုင်ဒါကြောင့်အပေါ်)။ အဝတ်လျှော်စက်တစ်ရှားပါး။ ၂၄-နာရီရေချိုးခန်းဝန်ဆောင်မှု။ ဒါဟာလွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေအဖွဲ့မှဆင်းမငြိမ်။ အထဲတြင္ဌားရန္:-အလုပ္။ တလပင်လယ်မှာ။ တစ်ဦးနေအိမ်ကိုဝယ်ယူ:အလွန်ကြီးစွာသောအိမ်သူအိမ်သို့မဟုတ်တိုက်ခန်း။ ကား:ဝယ်ယူခ၊ယူကရိန်းမှာ၊အဖြစ်နှစ်ဆယ်။ ရွင့္ -ကား:ေရာင္းရန္ကိုးရာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စားသုံးမှုများအတွက်လူနှစ်ဦး:တလ။ ဘလော့ကုန်ကျစရိတ်:စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ ပထမဇယားနှင့်ဒုတိယဇယား:ဒီဇင်ဘာလတစ်လအတွက်၊ဘယ်လိုရေရှည်အိမ္ရာခဲ့ငှားရမ်းထားသော:အဆိုအရနေ့စဉ်အချိန်ဇယား၊မဲ့(တလကို)။ တတိယအချိန်ဇယားပထမနှစ်ရက်မီနှစ်ရှည်ငှားရမ်းခအိမ္ရာ(ည)၊မပါဘဲလေယာဉ်နဲ့ရထားမှဗ်နှစ်။ ပါဝင်သော:အရာအားလုံးသင်လိုအပ်အသက်အဘို့အ။ ဘယ်အရာကိုထည့်သွင်း:(ဟုတ်ကဲ့သုံးတိုးျ)၊အခန္း(မီးဖိုဆောင်၊အိပ်အားလုံးအိမ်တော်၌၊ထုတ်ကုန်များ:နံ့သာမျိုး၊ဆား။)၊ တီများ၊လက်ဆောင်များ၊အချို့အမှုအရာ၊ရောက်ဖို့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကျွန်း၊မှော်ပြသ။ ဒေသခံသာသိတယ်။ လူအနည်းငယ်ကအဂၤလိပ္စပျမ်းမျှ။ တခါတရံမူလတန်းဒေသခံသိစကားလုံးအတွက်ဗမာ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဒီနေရာမှာတစ်ဦးကိုတလအတွက်၊သင်အသက်ရှင်နိုင်ဘဲသိတဲ့ဘာသာစကား၊ပေမယ့်ဒါဟာမကြာခဏပျော်စရာ၊ဒါပေမယ့်ကျွန်မအတွက်တစ်နာရီတစ်ရက်။ ယနေ့သင်ထည့်ထားသည့်အမိန့်အတွက်စားသောက်ဆိုင်၊ထုတ္ေပေးမပါဘဲအမူအရာမ်ားအားလုံးစပိန်အတွက်။ အားလုံးသော အောက်တွင်ချအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု(ဘရာဇီး)-အားလုံးလက်တင်အမေရိက၊ဒါကြောင့်ကျွန်မအကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဘာသာစကားသင်ယူခြင်းဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာနှင့်အသုံးဝင်သော။ ပေမယ့်ငါ့အစီအစဉ်ကြသည်မဟုတ်။ငါအကြောင်းရေးသားဤအသီးခြားစီ။
သင်သွားနိုင်ပါတယ်ကခုန်(မသိပါ)၊လက်ဝှေ့အတွက်၊တစ်ဦးအဖျားခတ်ကုလားထိုင်။ ကခုန်ဖို့သင်ယူပါမႊေ။ သင်သည်လည်းသင်ယူစပိန်နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားရုပ်ရှင်နည်းပြဆရာ။ စာအုပ်တွင်ဗမာ-သာအင်တာနက်ကနေတဆင့်။ ပေါင်း:ရဟတ်ယာဉ်ပျံသန်း၊ရေကူးနှင့်အတူပိုင်(အမျိုးအစားများ)၊ငါးမန်းနှင့်အတူရေကူး၊ရေငုပ်ရေငုပ်၊ပြတိုက်၊လှေ၊ငါးဖမ်း၊ဂျက်လေယာဉ်လျှောစီး၊၊ရွရွ၊ငါးဖမ်း၊တင်းနစ်၊ဘောလုံး၊ဘော်လီဘော၊ဘတ်စကက်ဘော၊ဂေါက်သီးအဂေါက်သီး၊၊၊လှိုင်းစီး၊ေ၊ကြီးမားတဲ့တိုက်။ လှပသောကမ်းခြေ(ဆယ်အတိအကျတူညီသောဆိုဒ်များ)၊အနီးအနားရှိကျွန်းစုများ(အနီးဆိုင်ကယ်အငှား)၊အနီးအနားရှိမြို့ကြီး(ကြီးမားနှင့်အတူအရပ်တွင်သမိုင်းကို)၊ပိရမစ်(ယာအပျက်အမျိုးမျိုး)၊စိတ်ကူးအပန်းဖြေဥယျာဉ် (အေးမြပန်းခြံ၊ကိုတွေ့မြင်ဖူးငါ့အသက်ကိုအတွက်)။ အကြောင်းရေးထားဆက်သွယ်ရေး-လူတို့နှင့်အတူသာ။ ခရီးသြားမ်ားလာအဓိကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွက်၊ကျနော်တို့ရှိသည်အဖြစ်သူတို့ထဲကအနည်းငယ်။ ပြားရှိနေကြသည်မဟုတ်နိုင်ငံခြားမှာအားလုံး။ ကျနော်တို့တွေ့ဆုံခဲ့အချို့ယောက်ျားတွေထဲကနေ၊ယူကရိန်း၊နှင့်ကျနော်တို့စကားပြောဖို့သူတို့ကိုပို။ နေဆဲလုံလောက်တဲ့။ ပုံမှန်မက္ကဆီယာသေးငယ်သည်၊အတို၊စင်တီမီတာအရပ်ရှည်ရှည်၊အလည်ပင်းနှင့်အတူတစ်ပြားချပ်ချပ်အစာအိမ်သို့မဟုတ်အခြားအလေးချိန်နှင့်အတူလွင်ပြင်တယ္။ ခရီးသွားလာအေဂျင်ဆိုသောအင်္ဂလိပ်စကားပြောလမ်းညွှန်နှင့်ရောင်းသူအလွန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်-ရုရှားခရီးပင်မသိရပါဘူး။"ရှိပါတယ်အချို့သောပြဿနာများနှင့်အတူ၊သူတို့ကို"အဖြစ်ခရီးသွားဧည့်စာရေးပြောသည်။ ဒါပေမယ့်ကောင်းတစ်ဦးရှိသည်ဖို့မဟုတ်ခရီးနှင့်အလုပ်ဗီဇာ။ လျှင်ရဲတပ်ဖွဲ့အလုပ်ရှာတွေ့၊သူတို့ရက္ပ်က္မရွိ။ သငျသညျကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ကြောင်းတစ်တထောင်ဒေါ်လာလျှင်သင်တက်လက်မှတ်ထိုး။ အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းန်ဆောင်မှုများ၏:လက္သည္း၊ေျခသည္း၊ပန်းချီဆွဲ-မိန်းကလေးများဆင်းရဲခံရ။ ယေဘုယျအနေဖြင့်၊အဥ၊အရာအားလုံးပုံမှန်အကြားလုံ့လနှင့်အရည်အသွေး။ သင်သွားဖို့အလုပ်နှင့်တိုက်ရိုက်။ နှင့်၊ယေဘုယျသည်နှင့်အညီငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့ကြုံနှင့်သာမဟုတ်၊ထိုကလပ်သည်အထူးသဖြင့်စမတ် မဟုတ်အတိအကျအချိန်-စားသုံးအဖြစ်၊အလွန်အများကြီးသာလွန်မှအသီးအသီးအခြားအတွက်ဒီအဓိပ္ပာယ်။ ကြောင့်"ငါတို့"လူတွေဆင်းရဲ(အားဖြင့်စီရင်ဂျီ)။ ရုရှား(ရုရှားနှင့်ပေးရမည်)ရိုးရိုးပါရမီ။ ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒေသခံဟင်းလျာ။ အဆိုပါထုတ်ကုန်မျှမျှတတစံ။ အနည်းငယ်ပိုပြီးအသီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှာကျွမ်း။ အစဉ်အလာရှိပါတယ်၊အဘယ်သူမျှမ ။ မကြီးစပါး၊ကောက်နှံနှင့်နို့၊အရာအားလုံးမကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်။ သွားပုံရသည်အားလုံးမက္ကမှလွဲချစ်ပ်နှင့်မုန်၊သောက်အစီအစဥ္မွမစားပါနဲ့။ အကော်ဖီ(အ)တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးဆုံးမုန့်ညက်၊ဒါပေမယ့်ငါကမကြိုက်ဘူး။ ပီဇာ ဆယ်လူ။ ကော်ဖီ။ အဆိုပါစားသောက်ဆိုင်များကြီးမြတ်၊ဒါပေမယ့်မအလွန်ကြီးစွာသော။ ထိပ်တန်း-ညစာစားပွဲကျင်းပခဲ့သည်မှာစားသောက်ဆိုင်:စပိန်၊ဥရောပနှင့်အိန္ဒိယအစားအစာ။ စားသောက်ဆိုင်များမှာအများအားဖြင့်လေအေးပေးစက်အဘို့အရေးအလုပ္အခြင့္အလမ္းမ်ား(အိန္ဒိယအတွက်သာသောက်တစ်ခုမှာကော်ဖီ)။ သူတို့အတူတူနေတုန်းပဲ၊ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေပိုပြီးစျေးထက်ရုရှားသို့မဟုတ်ယူကရိန်း။ နှိပ်နယ်၏ငါးဆယ်ကောင်းပညာရှင်များအဖြစ်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး၊ဒါပေမယ့်လည်းမရှိလျှင်-ပိုစျေးကြီးတယ်။ အထွေထွေအတွက်၊မက္ကစီကိုအများကြီးပိုပြီးအန္တရာယ်ထက်သို့မဟုတ်ယူကရိန်းကရုရှား။ ဒါပေမဲ့အဲဒါထက်အခြား အလွန်မာက္ခဲ့-ဒီမှာဒီအတွက်တင်းကြပ်စွာဖြစ်ပါသည်၊သူတို့ကမကြာခဏကလေးနှင့်အတူရိုင်ဖယ်။ မိတ်ဆွေတစ်ဦးတစ်ဦးသည်တစ်နှစ်သို့မဟုတ်တွေ့ဆုံခဲ့ဘယ်တော့မှ။ ကျနော်တို့အောက်တွင်၊ပြတင်းပေါက်၊အိမ်၏ပထမဦးဆုံးနေ့ကအပေါ်ခိုးယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး၊ဒါကြောင့်ငါကကပ်ဤအချိန်ဇယား:ငါသည်အရအတွင်း:-ရှစ်အတွက်အနက်ဖွင့်ဟုမဆိုစေ၊ငါသည်သင်တို့ကိုအပြေး(အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဝက်မာရသွန်)၊နားထောင်ဖို့အတွယ်နှင့်နံနက်စာ၊အလုပ်လုပ်ကိုင်နာရီစဉ်။ တစ်နေ့တာအတွင်း၊ကျွန်တော်တစ်နေရာရာမှာသွားကြဖို့ဒါမှမဟုတ်ကမ်းခြေလျှင်၊ယနေ့အပေါ်ကမ်းခြေ၊နေ့လယ်စာမှာကျနော်တို့သွားလျှင်၊ငါသည်သွားအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အနီးအနားရှိကော်ဖီ။ ညဉ့်အခါ၊ငါအခုထိငါသည်အဖတ်၊အလုပ်၊နှင့်သင်ပေးဖို့စပိန်(တစ်နာရီအဘို့တစ်နေ့)။ ကျွန်မအိပ်ရာဝင်သည်ခပ်သိမ်းသောနာရီ။ ကျနော်တို့အသက်ရှင်သော၊ကျနော်တို့ကဲ့သို့သောရာသီဥတု၊ကျနော်တို့အလုပ်၊ကျွန်တော်တို့စပိန်၊ကျနော်တို့အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူ၊သင်ယူနိုင်ကြရန်ဆောင်းပါးများရေးသားလိုအခုငါဖတ္၊ငါ။ -အများအားဖြင့်ရှိတယ်(ပျမ်းမျှအားဖြင့်)။ အဘယ်သူမျှမအင်တာနက်အတွက်အရက်ဆိုင်နှင့်လမ်း။ ခံရစေခြင်းငှါ။ ဒီနေရာမှာသင်နေထိုင်နိုင်ပြီးအသက်ရှင်နေထိုင်၊ဒါပေမယ့်အခုအတွက်တော့ငါရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးမှတစ်ဦးရွေးချယ်မှု။ ပြီးနောက်သင်လေ့လာသင်ယူစပိန်၊သင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ကဲ့သို့တူညီသောဥစ္စာ။ အရာတစ်ခုခုလည်းမရှိလိုလုပ်ဖို့၊ကောင်းမွန်သောရာသီဥတု၊အလေဆိပ်။ လျှင်သင်ရုတ်တရက်စတင်ချင်ခရီး-ဒီမှာကအကောင်းဆုံးနေရာ။.
အနက်ထားချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်အခွင့်အလမ်းကိုရှာတွေ့မှတစ်ဘဝလက်တွဲဖော်၊သင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်အိမ်ထောင်ဖက်အတွက်မက္ကစီကို။ ရှာဖွေ၊ဆွေးနွေးချက်နှင့်အတူနေ့စွဲ။ အနည်းငယ်အပြုသဘော။ သင့်ကိုကျေးဇူးတင်စာတစ်စောင်အတွက်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း:ချစ်သောဖောက်သည်ထောက်ခံမှုအဖွဲ့သည်။ ကျွန်မတွေ့ဆုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျန်ကြွင်းသောသူအပေါင်းတို့သည်င့်အဘယ်မှာရှိထွက်ရှာရန်ဒါဟာနေဆဲသင်တို့ကိုယူပြီး၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးအတွက်ထောင်။ နှင့်မည်သို့သင့်ရဲ့ဘဝဖွံ့ဖြိုးမပါဘဲခင္ဗ်ာ။ နှင့်မည်သို့သင့်ရဲ့ဘဝဖွံ့ဖြိုးမပါဘဲခင္ဗ်ာ။ နှင့်ပိတ်သည်၊ကြောင့်အပေါ်ဆိုက်မသိဘူး။ ရင်တောင်သူမဟုတ်၊ငါသည်အသိ။ ငါလိုတွေ့ဆုံရန်တစ်စုံတစ်ဦးမှပြောဆိုရန်၊ရှယ်ယာငါ၏စိတ်ကို၊သတင်း၊စသည်တို့ကို။။။နှစ်ဆယ်ခုနစ်ဇန်နဝါရီလ၏အနှစ်အတွေ့အကြုံ အတူမ်က္ရည္ေငါ့မျက်မှောက်၌၊ကိုဓာတ်လှေကားကိုပိတ်ဆို့နှင့်အထိမ်းအမှတ်ဘူးသောသူတို့အသက်ရှင်မီ ပြည့်စုံ၏။ ကောင်းသောအနံနက်အပေါင်းတို့သည်ငါ့ချစ်သူတို့။ ငါလာခဲ့မယ်၊အနည်းဆုံးယခုများ-ပိုပြီးအလုပ်နွေရာသီအတွက်၊နှင့်ယခုသူတို့လည်းအများကြီး။ ငါ၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ကြာမြင့်သောလှပပုံသဏ္ဍာန်၊ကျွန်တော်ရယ်တဲ့။ ဒါဟာအမြဲတမ်းပြဿနာတစ်ခုသည်အတိုင်း၊လူများအတွက်၊ရှာတွေ့မှအခွန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေ။ ယခုပြဿနာမရှိပါဘူး၊သင်အတွက်အသက်ရှင်။ ထိုနေ့လွန်ပြီနှင့်အရာစဉ်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်အသက်ရှင်၏ထိပ်တွင်။ မင်္ဂလာပါ၊လူတိုင်း။ ယနေ့ကျွန်မထံသို့ဝင်ပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တွေ့ဆုံရန်လူတိုင်းနှင့်တွေ့သူငယ်ချင်းတွေ၊ငါမျှော်လင့်သူတို့ဒီနေရာနှင့်အထွက်ရောက်ရှိဖို့ငါ့ကိုကယ်ဖို့ငါ့အကြောင်း၊မည်သို့ရဲ့။ မင်္ဂလာပါအားလုံးအတွက်ယုံကြည်သူအဘယ်သို့ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်အားလုံးအသက်အရွယ်။ မြှင်တစ်မိသားစုအပေါ်အခြေခံပြီးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်သစ္စာရှိမှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်။ အနက်ထားချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်အခွင့်အလမ်းကိုရှာတွေ့မှတစ်ဘဝလက်တွဲဖော်၊သင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်အိမ်ထောင်ဖက်အတွက်မက္ကစီကို။ ရှာ၊စကားပြော၊နှင့်အစီအစဉ်ရက်စွဲများနှင့်အတူမိန်းကလေးများ။
မက္ကဆီကိုသည်စပိန်နိုင်ငံ၊အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်ကာရစ်ဘီယံ။ လူများစွာတွဲဖက်နိုင်ငံနှင့်အတူသဲအိမ်များ၊လှပသောပင်လယ်၊၊ဒစ္စကို၊ရေကူးကန်။ ဤသည်အလွန်တောက်ပသောပြည်၊အရပ်၌များစွာသောသဘာဝနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု။ ဤပြည်ရှိရှေးဟောင်းသမိုင်းကရှိပါတယ်မဟုတ်သေးသင်ယူအဆုံးမှာ။ ဒါပေမဲ့အမှန်မှာမက္ကစီကိုရှိအရေးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လောက၊ကရှိပါတယ်အမျိုးအပုယဉ်ကျေးမှု၏။ ယာ ၊အင်အားကြီးပင်လယ်လှိုင်းတံပိုးများ၊အဖြူကမ်းခြေ-ဤသည်မက္ကစီကို။ လူအတော်များများသာအမြင်ဓာတ်ပုံတွေအတွက်။ ဒါပေမယ့်မက္ကဆီကိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့စီမံကိန္းကြည့်ဖို့ခွင့်ပြု။ မက္ကဆီအွန်လိုင်းနှင့်မက္ကများပြည်သူစကားပြောကင်မရာအလုပ်လုပ်သောအချိန်အတွက်ခွင့်ပြုဖို့သင်တကယ်ကြည့်ရှုမက္ကစီကိုအွန်လိုင်း။ ကက်ပလားအလာကင်မရာများကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ဒီနိုင်ငံ။ ရှာဖွေတွေ့ရှိမက္ကနှင့်အတူမက္ကဆီအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့။
여자 의 몸 구조
ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ချိန်းတွေ့ဆိုက်အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီချိန်းတွေ့ဆိုက်အခမဲ့ ချိန်းတွေ့အရွယ်ရောက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအခမဲ့ ဗီဒီယို အခမဲ့အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့ ငါတွေ့ဆုံရန်ချင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဗီဒီယိုချက်တင်အခန်းပေါင်း၊အွန်လိုင်း အဘယ်မှာရှိကိုသိကျွမ်းရ ဗီဒီယိုပျော်စရာဖုန်းများ